Commemoration of 7th July in Toronto, Canada
Burmese Students Democratic Organization Toronto (BSDO) will mark the 47th anniversary of 7th July. Over one hundred university students were killed at Rangoon University Campus on this day in 1962 and historic Student Union building was destroyed by the military while students were protesting against General Ne Win’s military coup.
Where: Burmese Python Soccer Club
430 St. Clarens Avenue
Date: Canada Day July 1st, 2010
Ko Maung Maung Oo at 1 416 605 8765
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/30/20090အကြံပြုခြင်း
Burma's cyber war rages on
Monday, 29 June 2009 15:07
Mizzima News - While the Internet has became one of the main tools at the disposal of opposition elements against political and cultural repression in authoritarian states, governments have in turn used the same technology to limit the effectiveness of political opposition by either commercial or propagandist means.
A debate about the Internet asatool of democratization has emerged since the first uses of the Internet under authoritarian systems of government. On the one hand, there are those who subscribe to the “determinist” theory, for whom the Internet can contribute to the collapse of dictatorships. On the other hand are the so-called “instrumentalists”, who take the position that an authoritarian regime can control the Web and exploit the Internet to serve its own interests. But the most important question is how authoritarian rulers choose an information technology strategy.
According to Nina Hachigian, in her paper 'The internet and power in one-party East Asian States': “The Internet presentsadilemma to leaders of authoritarian states and illiberal democracies. It promises enticing commercial advantages, such as transaction cost reductions, e-commerce possibilities, and foreign trade facilitation. Yet, by giving citizens access to outside information and platforms for discussion and organization, the Internet can also help politically empower populations and potentially threaten regimes."
According toareport recently released by the OpenNet Initiative (ONI) on information filtering in Asia, Asian governments are taking increasingly sophisticated steps to control access to Web content. The report reveals accelerating restrictions on Internet content as Asian governments shift to next generation controls. These new techniques go beyond blocking access to websites and are more informal and fluid while often backed-up by increasingly restrictive and broadly interpreted laws.
The report further points to an emerging inclination for states to actively engage in cyberspace asaway to achieve enhanced control of information: “Since 2006, many Asian governments have quickly realized the potential benefits of exploiting opportunities for conducting propaganda or public relations strategies over the Internet, even while cracking down on independent and critical voices thriving in these online spaces – an example of the evolution towards next generation controls,” finds the report.
Yet, the Internet has simultaneously been shown to be an especially effective tool for journalists, civil society activists and opposition leaders in Asia during elections or other times of national political crisis.
Burma showed one of the most dramatic examples of citizens using online tools to circumvent government control over information during the Saffron Revolution. It is clear that the particular attention of the international community and foreign media toward the 2007 uprising in Burma was partly due to the various uses of new information technology – and particularly the Internet.
These “netizens” have demonstrated that new tools of communication, and especially the Internet, can impact on the global coverage of events and even on the sequence of events themselves. Vital information coming from inside Burma was posted by overseas Burmese news organizations and the international media, ultimately being fed back into the country of origin via satellite television and radio, thus achievingabi-directional flow of information. Such newly available networks for the diffusion of information are surely challenging the rulers of closed countries like Burma.
Nonetheless, while “citizen journalists” provided the world with footage and news, the government eventually imposeda“blackout of the information”. By cutting all Internet connections, the junta tried to disarm "netizens" – in further testament to the perceived potential destabilizing effects triggered by such endeavors.
The push and pull battle over the Internet raisesaserious question: Can emerging online technologies truly alteracountry's isolationism and foster real political change?
Inaclosed country the Internet can effectively serve the propaganda efforts of the authoritarian regime while simultaneously providinganew capacity with which dissidents can communicate relatively freely without considering boarders. Further, more than simplyapolitical weapon, the Internet can also help to mobilize and raise public awareness and coordinate demonstrations and campaigns.
But still, there isadark side to the Internet that must be considered.
Since 1997 the junta has purchased sophisticated technology fromaSingapore-based company to assist in the development ofaCyber Warfare Center in order to accentuate efficacy and surveillance over the Army. Additionally, in May 2004, the junta purchased filtering software from American company Fortinet. ONI, largely asaresult of such information technology transfers, has chronicled an increasing level of effectiveness on the part of the Burmese regime in the control of information over recent years.
Burma, in the end, is caught inavicious cycle. As the junta appears unwilling to improve the life conditions of the population, as one tactic to stay in power, the economy of the country is consequently not industrially and technologically adapted to take maximum advantage of the Internet. Moreover, launching economic development via information technology is not deemed worth the political risk in the battle over the dissemination of information. Severe restrictions on Internet access is thus perceived as one strategy in denying opposition elementsagreater foothold in Burmese society.
To summarize, as economic stakes are low and political risks much higher, the junta is less willing to let the population make use of the Internet than other authoritarian countries who limit Internet access toalesser extent in order to foment economic development. “The exception," highlights the ONI report, "to the general embrace of ICT development [in Asian countries] has consistently been Burma.” However, for the regime there is alsoaconcurrent downside in such an approach, as the country becomes even less attractive to potential foreign investors.
The junta, though, is aware of the necessity to economically compete in the world economy. The construction ofacyber city by the generals is proof of this knowledge, while also further exemplifying the misappropriation of information technology development. The country’s largest information technology development, Yadanabon City – inaugurated in 2007, is projected to serve as the connection point for the regime with economic partners such as China, India and Thailand.
Apart from economic interests, the Internet can also serve the propagandist aims of governments. The junta tries to use the Internet asatool to spread its propaganda and political message to the world and to contradict accusations of its detractors. An active presence on the Web allows the government to present the world its own version of the facts. That is why the junta launched www.myanmar.com, allowing foreigners to read an electronic version of the state-run English newspaper The New Light of Myanmar.
However, examples of the collapse of governments in Southeast Asia because of popular mass protest with the support of the media – as in the Philippines in 1986 and Indonesia in 1998 – still keeps hope alive ofacoming shift in Burma.
But the Burmese example also reveals media pressure and "People Power" are not enough by themselves to ensure political transition. The media can assist in transition but not set the transition itself in motion. The media is dependant onanexus connecting the economic, social and political spheres.
Nonetheless, if an authoritarian regime can be affected by the uses of the Internet abroad, it is clear the Internet can in fact impact events insideaclosed society like Burma as well – by at least forcing the junta to act inaspace open to everybody’s eyes.
မဟောသဓ မရှိတဲ့ သားတရားစီရင်ခန်း
၃၀ ဇွန် ၂၀၀၉
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဘုန်းမော်နဲ့ ကိုစိုးနိုင်တို့ သေဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူပေးဖို့ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုတခုနဲ့ စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မဆလ အမည်ကို ယူထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက ထုံးစံအတိုင်း ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေသုံး ကလိမ်ကကျစ်တွေလုပ်ရင်း အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ ကြာညောင်းလာတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ ပြည်သူလူထုအများစုကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှုက ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကိုယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ပါတီကို အကျပ်အတည်းပေါင်းစုံအတွင်း ကျောခိုင်း စွန့်ခွာ (ကိုယ်ထောင်တဲ့ပါတီ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်) ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နောက်ဖေးတံခါးပေါက်က ခပ်လျှိုလျှိုနဲ့ အသာလစ်ထွက်သွားဖို့ ရှေ့ပိုင်းမှာ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်နေဝင်း ဟာ အဲဒီလိုမရှူနိုင် မကယ်နိုင် ဖြစ်လာတော့မှ သူလက်သပ်မွေး ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်စောမောင်အကူအညီနဲ့ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုပြီး မဆလကို တဖက်လှည့်နဲ့ ကယ်တင်ကာ တစညဆိုတဲ့ အမည်သစ်နဲ့ သက်ဆိုးရှည်စေခဲ့တယ်။
နဝတ အမည်နဲ့ ရသေ့ရှစ်သောင်းဇာတ်ကို ဆက်ကခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကို လုံးဝပယ်ချ လျစ်လျူရှုခဲ့ပေမယ့် အားကောင်းမောင်းသန် စီးဆင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒေါသဒီရေအဟုန်ကို လမ်းလွှဲတဲ့အနေနဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိကို ပေးခဲ့တယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဲဒီတုန်းက အရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့ လူထုရဲ့အုံကြွမှုဒီလှိုင်းကို ဆက်လက်ပဲ့ကိုင်ပြီး ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အထိ ဆက်လက်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားရင် အောင်ပွဲကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ကောင်း ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြည်သူလူထုကြီး အထိအခိုက်အကျအဆုံးများပြီး အမြတ်ထက် အရှုံးက ပိုများမှာကို စိုးရိမ်မိတဲ့စိတ်နဲ့ တထစ်လျှော့ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါက စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေက ပထမဆုံးအကြိမ် အလျှော့ပေးလိုက်လျောခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့မှာ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို လူထုနဲ့အတူ ချီတက်ဂါရဝပြုဖို့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မူလက စီစဉ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က နဝတဟာ ဧရာမ လူသတ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းတခုကို ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထုနဲ့အတူ ချီတက်မယ့် သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း အချိန်ကပ်ပြီးမှ ကြေညာလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွံသွားပြီဖြစ်တဲ့ လူထုအစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ နဝတ လုံထိန်းတွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံသွားခဲ့ကြရပြီး ထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ် ခံခဲ့ကြရတယ်။ ဒါက ဒုတိယအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
သမားရိုးကျ ဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကပြောရင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြီးစီးသွားလို့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကို တရားဝင်ကြေညာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက ရက်ပေါင်း (၆ဝ) အတွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ပေးပြီး ကိုယ်စားလှယ် အများစု အနိုင်ရပါတီကို ဦးဆောင်အစိုးရဖွဲ့စေကာ အဲဒီအစိုးရကို အာဏာလွှဲအပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့အခြေအနေကို သဘောပေါက်ထားကြတဲ့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမှာ တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရကြောင်း သတင်းတွေ အခိုင်အမာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာ လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရေးကို မတောင်းဆိုဘဲ နဝတနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပဲ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါက တတိယအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် စစ်တန်းလျားပြန်မယ်၊ နိုင်တဲ့ပါတီက (၄၇) နဲ့ (၇၄) ကြိုက်ရာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့ကြ၊ အခြေခံဥပဒေအသစ် ရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရေးကြပေါ့၊ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာ စစ်တပ်က တရားခံ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွဲကြပေါ့” လို့ လူသိရှင်ကြား အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ နဝတဟာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အနိုင်ရပါတီက ဂန္ဓီခန်းမညီလာခံကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေခိုက်မှာ ၁/၉ဝ ကြေညာချက်ကို ကတိုက်ကရိုက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကြေညာချက်ရဲ့ အနှစ်သာရက ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီများဟာ (၄၇) သို့မဟုတ် (၇၄) အခြေခံဥပဒေတခုခုကို အသုံးပြုပြီး အစိုးရဖွဲ့ခွင့်မရှိဘူး။ အခြေခံဥပဒေအသစ် ရေးဆွဲရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။
နဝတဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က သူပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို သူကိုယ်တိုင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့ အဲဒီကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရုံသာမက ပါတီအားလုံးကိုလည်း အဲဒီကြေညာချက်အတိုင်း လိုက်နာပါ့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို အတင်းအကျပ် လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့တယ်။ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးကြာ ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်မှု (Mandate) ကို ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီဟာ ပြည်သူတွေ'နာ'မှာကို စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါက စတုတ္ထအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် မြန်မာပြည်သူတွေ ခါးစည်းခံနေကြရတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ဆက်ပြီး မရှုရက်မမြင်ရက်တော့လို့ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဝကို အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်ကာ နာကျင်ပင်ပန်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမီးတောက်မီးလျှံထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးတင်ဦးဟာလည်း ပြည်သူတွေကို စာနာစိတ်ထားခဲ့မိတဲ့အတွက် စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ မျက်မာန်တော်ရှခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံကို ကယ်တင်လိုတဲ့ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် ဦးဆောင်တဲ့ မျိုးချစ်စစ်သည်တစုရဲ့ အကြံအစည်ကို ဗိုလ်နေဝင်းထံ သံတော်ဦးမတင်မှုနဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးအပေါ် မြန်မာပြည်သူတွေထားရှိတဲ့ မေတ္တာထုထည်ကို သိရှိပြီး တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေကြတဲ့ နဝတဟာ အဲဒီလူထုခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို အပြစ်ရှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။ သူတို့အထိန်းသိမ်းခံနေရခိုက်မှာ အပြင်မှာရှိနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို အကျပ်ကိုင်ဖိအားပေးပြီး အဲဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ပါတီက ထုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်တဲ့ အဲဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို အန်အယ်လ်ဒီကထုတ်ပစ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်နှလုံးသည်းပွတ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်လှီး ဖြတ်ပြီး ထုတ်ပေးရတဲ့ အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်ပေမယ့် ကျန် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူတွေကို ငဲ့ညှာတဲ့စိတ်နဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို နဝတ အလိုကျ ပါတီက ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါက ပဉ္စမအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ အန္တိမမျှော်မှန်းချက်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထွန်းကားရေးဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီဟာ အဲဒီအရေးတော်ပုံကြီးထဲမှာ မီးရှူးသန့်စင်ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ၁/၉ဝ ကြေညာချက်နဲ့ ပါတီအများစုကို နှိပ်ကွပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၃ မှာ နဝတ တဖြစ်လည်း နအဖ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတုန်းက တခွန်းမှ မဟခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာကို ဦးစီးကျင်းပခဲ့တယ်။
အဲဒီညီလာခံမှာ အခြေခံမူကြီးဆိုတာ (၆) ချက်ပါရှိပြီး အဲဒီထဲက ဆဋ္ဌမမြောက်အချက်က “မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်က ဦးဆောင်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရေး” ဖြစ်တယ်။ အနှစ်သာရက စစ်အာဏာရှင်စနစ် တရားဝင် ရာသက်ပန် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်ဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒ တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီသာပဓာန ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ် တယ်ဆိုတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ အခြေခံမူနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူလူထုကို ငဲ့ညှာပြီး အဲဒီအမျိုးသားညီလာခံ ဆိုတာကို ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါက ဆဋ္ဌမအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းဟာ ကမ္ဘာတုန်သွားခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီး (Global Crime) ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအရေးအခင်းအတွင်း နအဖရဲ့ ကြေးစားလူမိုက်လူရမ်းကားတွေဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လက်စတုံးစီရင်ဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် “သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမ” ဆိုသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အသက်ဘေးက သီသီကလေး လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ နဝတဟာ အဲဒီရာဇဝတ်မှုကြီးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး သက်သေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးတို့ကို အဲဒီအရေးအခင်းဖြစ်တဲ့ နေ့ကစလို့ ဖမ်းဆီချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာ ဒီကနေ့အထိဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသံကို ကမ္ဘာက ပထမဆုံးကြားလိုက်ကြချိန်မှာ ကြားလိုက်ရတဲ့အသံက ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ် အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အသံမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နအဖနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုတယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုသံသာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဝခံစားချက်နဲ့ ဝေဒနာများကို လုံးဝလျစ်လျူရှုပြီး နိုင်ငံ့အရေးကို ရှေ့ဆုံးမှာထားကြောင်း ထပ်မံပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါက သတ္တမအကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့နောက်မှာ ဘယ်ရှုထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့် အန်အယ်လ်ဒီဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရရင် အန်အယ်လ်ဒီကို အတိုက်အခံလို့ ရည်ညွှန်းပြောဆို ရေးသားနေကြတာတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့ ဖော်ပြမှုများသာဖြစ်ပြီး ပကတိအခြေအနေမှာ တကယ့်အတိုက်အခံက တစညနဲ့ အဲဒီပါတီကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ နအဖသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် “ဘုရားကား အောက် မျောက်ကားအထက်” ဆိုသလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သဘောပေါက်ထားကြတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်များဟာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် တလျှောက်လုံး မိမိတို့ပါတီရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အနေအထားကို စူးစူးရဲရဲ ထုတ်ဖော်ကြေညာတာမျိုး တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘဲ နဝတ၊ နအဖတို့ကို တရားဝင် အစိုးရတခုသဖွယ် ပြောဆိုပြုမူ ဆက်ဆံလာခဲ့ကြတယ်။
တဘက်မှာ ပြည်သူတွေအပ်နှင်းထားတဲ့ အခွင့်အာဏာ၊ တဘက်မှာ တကမ္ဘာလုံးကို ဆန့်ကျင်အန်တုပြီး ငါတကောကောနေတဲ့ စစ်အုပ်စု။ နံရံနှစ်ခုကြား ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လမ်းမြှောင်ကလေးပေါ်မှာ ယိမ်းယိုင်ပြိုလဲ မသွားရလေအောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ မိမိတို့တလျှောက်လုံး ကိုင်စွဲလာခဲ့တဲ့ “ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ” မူဝါဒရဲ့ အပျော့ပျောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို လူသိရှင်ကြား ဖော်ထုတ်ကြေညာခဲ့တော့ တယ်။ အဲဒါကတော့ နအဖ က ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးပါ။ အဲဒီလွှတ်တော်က နအဖကို မြန်မာပြည်သူတွေကရော၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကပါ အသိအမှတ်ပြုလာကြစေမယ့် ‘တရားဝင်’ အစိုးရ တခုအဖြစ် ကြေညာပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်တယ်။ ဒါက အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အလျှော့ပေးခဲ့မှု ဖြစ်တယ်။
ဒါတွေကတော့ ၁၉၈၈ ကစလို့ အခုအထိ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူလူထုအပေါ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျစော်ကားလာခဲ့တဲ့ နအဖစစ်အာဏာရှင်တွေကို လူထုခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူလူထုကို ငဲ့ညှာပြီး “ပြည်သူလူထု သွေးချောင်းစီးမှာကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်” အဆုံးစွန်အထိ အလျှော့ပေးလာခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီး ဖြစ်တယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်တွေဘက်က အဲသလို အလျှော့ပေးခဲ့ပေမယ့် မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ။ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဘက်က နောက်ကို တလှမ်းဆုတ်ပေးလိုက်တိုင်း စစ်အုပ်စုဘက်က ရှေ့ကိုတလှမ်း တက်လာတာချည်းပဲ မဟုတ်လား။ ဆုတ်ပေးရင်း ဆုတ်ပေးရင်း အခုတော့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးစွန်းပေါ် ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအမြင်ပဲ။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီ လှမ်းမယ့်ခြေလှမ်းဟာ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ကံကြမ္မာကို အပြီးသတ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ကံကြမ္မာဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရုန်းကန်မှုအစဉ်ကြီးထဲက အလွန်အရေးပါတဲ့ အကန့်တကန့်ရဲ့ ကံကြမ္မာပဲဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် မဟောသဓ ဇာတ်တော်အကြောင်း မဖတ်ဖူးရင်တောင် ကြားဖူးနားဝတော့ ရှိကြမှာပါ။ အဲဒီဇာတ်တော်ထဲက ‘သားတရားစီရင်ခန်း’ ဆိုရင် ကရုဏာရသနဲ့ ဝိဘစ္ဆရသကို ပေါ်လွင်အောင် နှိုင်းယှဉ်ပြပြီး သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်တာမို့ ဖတ်ဖူးကြားဖူးသူတိုင်း နှလုံးသားထဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလို တသက်လုံး စွဲမြဲနေကြမယ့်ဇာတ်ကြောင်း ဖြစ်မှာသေချာတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အဲဒီဇာတ်ကြောင်းမှာ ကလေးကို အလယ်မှာထားပြီး လုကြတဲ့အခါ နာကျင်လို့ ငိုတဲ့ကလေးရဲ့ ငိုသံက မိခင်ရင်းဖြစ်သူရဲ့ နှလုံးသားကို မခံမရပ် နိုင်အောင် နာကျင်စေတာမို့ မိခင်ရင်းဟာ ရှုံးချင်ရှုံးပစေတော့ဆိုပြီး ကလေးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
မဟောသဓရဲ့ ပထမစီရင်ချက်အတိုင်းဆိုရင် မိခင်ရင်းကရှုံးပြီး ကလေးကို ဘီလူးမက ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မဟောသဓက ဇာတ်လမ်းထဲကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံဝင်ရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ပညာ၊ ရှေ့က အစဉ်အလာတွေအရ သူရရှိထားတဲ့ သြဇာအရှိန်အဝါ၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့ ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေရဲ့ အညွတ်အနူး ထောက်ခံမှုတို့ကို အသုံးပြုပြီး မိခင်ရင်း ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဘီလူးမကလည်း မျိုးမတူဇာတ်ခြား၊ သားစားကျူးတဲ့ ဘီလူးမဖြစ်သည့်တိုင်အောင် လူသားကလေးငယ် တယောက်မျှသာဖြစ်တဲ့ မဟောသဓရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ခံယူပြီး အရှုံးပေး နောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ အချင်းအရာ အတော်များများမှာ အဲဒီသားတရားစီရင်ခန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့ ရနေတာကို မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကို အလယ်ကထားပြီး လုနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ ဘယ်သူက မိခင်ရင်း၊ ဘယ်သူက ဘီလူးမ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေအထင်အရှား ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့ နွေနေထွန်းလင်းတဲ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးထိုးပြစရာ လိုမယ်မထင်ဘူး။
မဟောသဓဇာတ်တော်ထဲက သားတရားစီရင်ခန်းနဲ့ ယနေ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတို့အကြား နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားရာမှာ အခြေခံသဘောအားဖြင့် တူညီတာ တော်တော်များများရှိနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာ မတူညီတဲ့ အဓိက ခြားနားချက်ကြီးတခုလည်း အထင်အရှားရှိနေတယ်။ အဲဒါကတော့ သားတရားစီရင်ခန်းမှာ ဇာတ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီး ကလေးငယ်ကို မိခင်လက်ထဲ လွှဲအပ်ပေးရမယ့် စီရင်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မဟောသဓရှိနေပေမယ့် ယနေ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာတော့ အဲသလို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ မဟောသဓ မရှိခြင်းပါဘဲ။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်ကစလို့ အခုအထိ သားတရားစီရင်ခန်းထဲက မိခင်ရင်းနဲ့တူတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေက ကလေးငယ်နဲ့တူတဲ့ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အလျှော့ပေးခဲ့ပေမယ့် ဘီလူးမနဲ့တူတဲ့ အာဏာရှင်တွေကတော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အားလုံးအမြင်ပဲ။
စစ်အုပ်စုဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရာသက်ပန် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အရာရာတိုင်းကို လုပ်ဆောင်နေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို အမေရိကန်၊ အီးယူနဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့လို ယဉ်ကျေးတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း မပြောနဲ့၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယနဲ့ အာဆီယံတို့လို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို အဓိကထားပြီး နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နေကြတဲ့ နအဖရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင် သိကြတယ်။ အဲဒီမိတ်ဆွေနိုင်ငံ တွေက အခွင့်အရေးရရင်ရသလို “အမျိုးသားပြန်လည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး” “ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံး ပါဝင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေး” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေ သုံးနှုန်းပြီး နအဖကို တိုက်တွန်းပြောဆိုလေ့ရှိကြတာကိုကြည့်ရင် နအဖရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေဆိုသူတွေကတောင် ဘဝင်မကျကြဘူး ဆိုတဲ့အချက်က ထင်ရှားပေါ်လွင်လှတယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ နွားအိုနောက်ကျသား နအဖ ကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တရားမျှတ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်တဲ့ တောင်းဆိုချက်မှန်သမျှကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်းချေလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့ ဝင်ရိုးမဏ္ဍိုင်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် အမှုဆင်ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ဖို့အထိ ကြံစည်ကြိုးစားနေပြီ ဖြစ်တယ်။
အခုဆိုရင် နအဖဟာ ဘီလူးမ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူနဲ့သူ့ဘေးနားက မင်းမြှောင်ကပ်ဖားတသိုက်ကလွဲလို့ တကမ္ဘာလုံးက သိနေကြပြီ။ ပြဿနာက ဒီကနေ့လက်ရှိကမ္ဘာမှာ နအဖ ဘီလူးမကို တောထုတ်နိုင်မယ့် မဟောသဓ မရှိဖြစ်နေခြင်းပဲ။ အနှစ်နှစ်ဆယ် အတွေ့အကြုံတွေအရ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အီးယူ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဟောသဓ ဖြစ်လာဖို့ မမျှော်လင့်နိုင်ဘူး။
ဒီလိုဆိုရင် ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမှာလဲ။ နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ရှည်ကြာရင့်ညောင်းလှပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီကနေ့အထိ သွေးထွက်အောင် မှန်နေဆဲဖြစ်ပြီး နောင်ကိုလည်း စကြဝဠာတည်သရွေ့ ဆက်လက်မှန်ကန်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့ ‘ဥစ္စာရင်လို၊ ဥစ္စာရင်ခဲ’ ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ ရည်ညွှန်းကိုးကားရဦးမှာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးအနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဘီလူးမလက်ထဲက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြိုးစားရုန်းကန်လှုပ်ရှား ထကြွကြရမှာပဲဖြစ်တယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးက ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားခြင်းခံရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပဲဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီမှာမှ ပါတီရဲ့ ဦးဆောင်ပဲ့ကိုင်နေရာကို ရယူထားတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (CEC) ဟာ အခရာဖြစ်တယ်။ ပါတီသက်တမ်း တလျှောက် အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်က အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေ အချိန်အခါ နေရာဒေသအလျောက် သမိုင်းပေး တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီးပြီ။ အဲဒီကာလတလျှောက် CEC က အခမ်းအနားတွေ လုပ်တဲ့နည်းလမ်း၊ ကြေညာချက်တွေထုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကို ဘဝင်မကျသူတွေ ရှိပေမယ့် “အချိန်တန်တော့ နွားပိန်ကန်မပေါ့” ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သည်းခံစောင့်ဆိုင်း လာခဲ့ကြတယ်။
အခုတော့ မကြာခင် နောက်ဆုံးပိတ် အသေအကျေတိုက်ပွဲ (Showdown) ရောက်လာတော့မယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ နအဖ ရဲ့ Showdown ပဲ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ‘အားစမ်း’ လာခဲ့တဲ့ နအဖဟာ ဒီပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီကို အပြတ်ဖြိုလှဲပြီး အဲဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး သူတို့အသည်းနှလုံးထဲမှာ စူးနေတဲ့ ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ‘ဆူး’ ကို နုတ်ပယ်ပစ်လိုက်ဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ အဖွင့်ပဏာမတီးလုံးအဖြစ် ဘီလူးဆိုင်းတီးပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် လမ်းရှင်းထားဖို့ ကြံစည်နေပြီဖြစ်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်း ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက် ရင်လည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်တာနဲ့ပဲ ပြီးမှာလား။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ထွက်လာရင်ကော။ ပြည်သူလူထု နစ်နာမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ နောက်တလှမ်းဆုတ်ပေးဦးမှာလား။ အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောပေါက်ဖို့က မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကြေညာချက်တွေကို ငြီးငွေ့နေပြီဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့ထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်က အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ အခုတခါ ခြေတလှမ်းဆုတ်ပေးပြီးရင် နောက်တခါ ဆုတ်စရာ ခြေထောက်တောင် မရှိတော့မယ့် အနေအထားပါ။
လက်နက်အားကိုးပြီး ပြည်သူကို ဗိုလ်ကျအုပ်စိုးနေတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်တခုကို အမြစ်ဖြုတ်ဖယ်ရှားမယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ပါတီတရပ်အနေနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အကြမ်းမဖက် လက်နက်အားမကိုးတဲ့ နှလုံးရည်နည်းလမ်းကို ကိုင်စွဲကျင့်သုံးသွားဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီပါတီ မလွဲမသွေကိုင်စွဲရမယ့် လက်နက်က တခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ လူထုပဲဖြစ်တယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဟာ မှော်တန်ခိုးစွမ်းအားရှင်တွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် စစ်ဖိနပ်အောက်က ပြည်သူတွေကို “အထိအခိုက်အရှအနာမရှိ လွတ်မြောက်စေသတည်း” လို့ ရေရွတ်ပြီး လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်မြောက်ချိန်တန်နေပြီဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ဖို့လည်း ပိုင်းဖြတ်ချက် အခိုင်အမာရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့တပ်ဦးက ချီတက်ပြီး မကြာခင်လာတော့မယ့် နောက်ဆုံးအသေအကျေတိုက်ပွဲ Showdown ကို ဆင်နွှဲရတော့မှာပဲဖြစ်တယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီဟာ ငါတို့နှင်းအပ်လိုက်တဲ့ အခွင့်အာဏာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ပါတီ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကာလအတွင်း ပြည်သူတွေရင်ထဲ တစတစ မြင့်တက်လာခဲ့တာဟာ ပကတိ အရှိတရားတခု ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေဟာ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုကို သဘောပေါက်နားလည်ကြတဲ့ တချိန်တည်းမှာ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ညံ့ဖျင်းအားနည်းချက်တွေကိုလည်း မလွှဲသာ မရှောင်သာ မြင်တွေ့နေကြရတာမို့ အဲသလိုသံသယတွေ ဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်။
ကံကြမ္မာရဲ့ သရော်လှောင်ပြောင်ချက် (Irony) လေလားမသိ။ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရားအမှုဆင် စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ မကြာခင်လာတော့မယ့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတို့ဟာ အန်အယ်လ်ဒီကို သမိုင်းရဲ့ ရေဆိုးမြောင်းထဲ ကျရောက်သွားစေနိုင်မယ့် ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတဲ့တချိန်တည်းမှာ အန်အယ်လ်ဒီကို ရတနာကိုးပါး စီခြယ်တဲ့ သမိုင်းရဲ့ နန်းပလ္လင်ထက်သို့ တွန်းတင်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။
အထင်အရှား မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခင်းအကျင်း အနေအထားတွေအရ ဘီလူးမကတော့ ကလေးကို အရှင်ရရ အသေရရ မရရအောင်ဆွဲတော့မယ့်ပုံ ရှိနေပြီ။ ကလေးငယ်ရဲ့ငိုကြွေးသံနဲ့ မိခင်ရင်းရဲ့မျက်ရည်တို့ကို ကြားနေမြင်နေကြရတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေလည်း ရင်ထုမနာ ဖြစ်နေကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်တော်ထဲက သားတရားစီရင်ခန်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ မဟောသဓတော့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ မရှိဘူး။ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလုပ်ကြမှာ လဲ။ မဟောသဓ မရှိတဲ့ ‘သားတရားစီရင်ခန်း’ မှာ မိခင်ရင်းကိုယ်တိုင် မဟောသဓ ဝင်လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းကလွဲပြီး တခြားနည်းလမ်း ရွေးစရာမရှိဘူး။ တွေဝေနေဖို့အချိန် များများလည်း မကျန်တော့ဘူး။ ဒီပွဲမှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီ နောက်တလှမ်း ဆုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းကြောင်းမညံ့တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အန်အယ်လ်ဒီကို ကျောခိုင်းစွန့်ခွာပြီး “နိုင်ငံရေးသစ်” လမ်းကြောင်းဘက်သို့ မျက်နှာမူကြတော့မှာဖြစ်တယ်။
Monday, 29 June 2009 17:25 ကိုထွေး
မန္တလေးမြို့နှင့် တောင်ကြီးမြို့သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းက ရှည်လျားလှသည်။ မြေပြန့်ဖြစ်သည်နှင့် အညီ လမ်းက ဖြောင့်တန်းသကဲ့သို့ အနည်းငယ် ချောမွေ့လာသည်။
သို့သော် ကားလမ်းတလျှောက်တွင် မမြင်နိုင်သော အာရုံထွေပြားစရာကိစ္စ အများအပြား ရှိနေပါသည်။ တချို့သော ကားရပ်နားသည့် နေရာများတွင် ရှိသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၊ ကာရာအိုကေ ဆိုင်များနှင့် ဓာတ်ဆီဆိုင်များက ကားမောင်း သမားများကို သူ့ထက်ငါ မြူဆွယ်နေကြပါသည်။
ဤကားများသည် သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ထုတ်ကုန်များကို သယ်ဆောင်လာကြသော ကားများလည်း ဖြစ်ကြသည်။
ပူပြင်းသောရာသီဥတုနှင့် လမ်းခရီးတွင် ရှိသော စစ်ဆေးရှာဖွေမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ကားအများစုသည် ညဘက်မှသာ မောင်းနှင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် ယာဉ်ထိန်း ရဲများက အနီရောင်မီးများဖြင့် ဝှေ့ယမ်းကာ ငွေကြေး တောင်းခံလေ့ရှိသည်။
တခါတရံ ရှေ့မှဓာတ်မီး(သို့မဟုတ်)မီးရောင်ဖြင့် ဝှေ့ရမ်းပြသည်ကို သူတို့ ကြုံကြရသည်။
နောက်တခုက လိင်ဖျော်ဖြေရေးအလုပ်လုပ်သူများက ကားမောင်းသမားများကို ခေါ်တင်သွားရန် အချက်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကားဒရိုက်ဘာ မဟုတ်သော ကျနော့်အနေဖြင့် ညဘက် ကားမောင်းသည့် ခရီးတလျှောက် အတွေ့ အကြုံရလို၍ ကားမောင်းသည့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းထံ ခွင့်တောင်းကာ မန္တလေးမှ ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် တောင်ကြီးသို့ လိုက် လာခဲ့သည်။ မိတ်ဆေဖြစ်သူက အဖော် ပါလာ၍ ၀မ်းသာနေသည်။
တချို့သော ထရပ်ကားများက ယာဉ်တန်းသဖွယ် စုဖွဲ့သွားကြသကဲ့သို့ ကားသမားအချင်းချင်းလည်း မိတ်ဆွေစုများသဖွယ် ဖြစ်လာကြသည်။ အဝေးမှ မိတ်ဆွေ ထရပ်ကားတစီး ချဉ်းကပ်လာလျှင် အရှိန်ကိုလျှော့၍ မီးကိုပြကာ ဟွန်းတီး နှုတ်ဆက် တတ်ကြသည်။ တခါတရံ ကားကို လမ်းဘေးချ၍ အေးအေးလူလူ စကားစမြီပင် ရပ်၍ ပြောဆို တတ်ကြသေးသည်။
လမ်းခရီးတွင် အစစ်အဆေး အဖမ်းအဆီးရှိလျှင် မိတ်ဆွေ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အချက်ပြလေ့ရှိ ကြသည်။
ညနေစောင်းတော့ ကျနော်တို့က မန္တလေးမှ စထွက်ကြသည်။ သိပ်မကြာခင်ပင် မှောင်သွားသည်။ ခရီးရလာသည်နှင့်အမျှ မြို့ကြီးက အဝေးတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ပြန့်ပြူးသောမြေပြင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ ခြုံပုတ်များ၊ တဲအိမ်ရွာစုများ ကွက် ကျား စီချယ်ထားသော မြင်ကွင်းကို ဖြတ်ခဲ့ရသည်။
ရုတ်ချည်းဆိုသလို ညတွင် ပိုးစုန်းကြူးလင်းသည့်အလား၊ ရှေ့မီတာ ၁၀၀ ခန့်မှနေ၍ ဓာတ်မီးတလက်က ကျနော်တို့ကား ကို အချက်ပြနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
"အဲဒါက ကောင်မလေးတွေ အချက်ပြတာပဲ၊ စိတ်ဝင်စားရင် ခေါ်လို့ရတယ၊် တကယ်လို့ သူ့ကိုခေါ်ချင် ရင်တော့ ကားရှေ့မီးနဲ့ အချက်ပြလိုက်ရုံပဲ၊ နောက်တော့ ခေါ်တင်သွားပေါ့"ဟု ကျနော့် မိတ်ဆွေက ပြောပြသည်။
ကားမီးရောင်တွင် မိန်းကလေး၏ ရုပ်သွင်ကို ခေတ္တမြင်ရပြီး၊ ကားက ဖြတ်သွားသည်။ သူက အတော်ငယ်ရွယ်သေးပုံရ သည်။ မျက်နှာတွင်တော့ မိတ်ကပ်အဖွေးသား ဖြစ်နေသည်။
ကားလမ်းဘေးတလျှောက် ဤကိစ္စလုပ်စားကြသူများက ၂,၀၀၀ ကျပ်မှ ၄,၀၀၀ ကျပ် အကြား ဈေးခေါ်လေ့ရှိကြောင်း ကျနော့်မိတ်ဆွေက ရှင်းပြသည်။
"ခင်ဗျားက ခေါ်လာပြီဆိုပါတော့၊ ဘယ်လို ပြန်ပို့မှာလဲ"ဟု ကျနော်က မေးသည်။
ကျနော်မေးမိသည့် မေးခွန်းကြောင့် သူက ထုံအလှချည်လားဟူသည့် သဘောဖြင့် ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ ပြုံး၍ "ကားတွေ က ဟိုဘက်သည်ဘက်သွားနေတာ အများကြီးပဲ၊ တခြားဖောက်သည်နဲ့ ချိတ်ပြီး ပြန်လာတာပေါ့"ဟု သူကဆိုသည်။
အကယ်၍ မိန်းကလေးတင်ခေါ်လာခဲ့သည့် ကားဒရိုက်ဘာက ကိစ္စပြီးပါက တခြားဆန့်ကျင်ဘက်မှလာနေသော ကားကို မီးပြ၍ ပြန်ခေါ်သွားရန် ရှိ မရှိ မေးကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို့က ထိုမိန်းကလေးများကို ဤနည်းဖြင့် ကားတစီးမှ ကား တစီး သို့ ကူးပြောင်းရင်း ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
ဤသို့ ကိုယ်ခန္ဓာရောင်းချရင်း အသက်မွေးနေကြရသည့် မိန်းကလေးအများစုသည် လမ်းတလျှောက်ရှိ ဆင်းရဲသော ကျေး ရွာများမှဖြစ်ပြီး တခြားအလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရန်လည်း မဖြစ်နိုင်၊ ရရှိသည့်ဝင်ငွေက မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် မလောက်ငသဖြင့် ယခုကဲ့သို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
ယနေ့ကာလများတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများပါ သူတို့ကျောင်းစားရိတ်အတွက် ဟိုက်ဝေးပေါ်မှ ပျော်တော်ဆက်လုပ် ငန်းအတွင်းသို့ ပို၍ ၀င်ရောက်လာကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ကားဆရာက ပြောပြရာတွင် ဤသို့ ဟိုက်ဝေးတလျှောက်ပျော် တော်ဆက်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူများ ယခုနှစ်များအတွင်း ပို၍ များပြားလာသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
"အာဏာပိုင်တွေက ဒီကိစ္စတွေကို သိသလား"ဟု ကျနော်က မေးမိသည်။
"ရဲတွေက လျစ်လျူရှုထားတာပါပဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမိန်းကလေးတွေဆီကနေ အမြတ်ထုတ်ကြတာပေါ့"ဟု သူက ပြောပြ သည်။
"တခါတလေမှာတော့ သူတို့က လာခေါ်တတ်တယ်၊ ကိစ္စပြီးတော့ ငွေမပေးဘဲ နေကြတယ်၊ ဈေးလျှော့ပေးဖို့ တောင်း တာလည်း ရှိတယ်၊ တကယ်လို့ ငြင်းမယ်ဆိုရင်လည်း အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေက ကြောက်ကြတာပေါ့" ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့မှ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (မိုင် ၆၀) ခန့်သို့ မောင်းလာသည့်အခါ ရွှေတောင်ဟူသည့် ကွန်းထောက်စခန်းသို့ ရောက် လာခဲ့သည်။ ညက အတော်နက်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း စားသောက်ဆိုင်ကတော့ ဖွင့်နေသေးသည်။ ကျနော်တို့ က တခုခု စားသောက်ရန် ဆိုင်တွင်းသို့ ဝင်သွားခဲ့သည်။
စားပွဲထိုးက စားပွဲသို့ အစားအသောက်များနှင့် ရောက်လာသည့်အခါ၊ အခြေအနေကို နားလည်နေပြီး သော ကျနော့် မိတ်ဆွေက တိုးတိုးမေးလိုက်သည်။
"ရှိတယ်"ဟု စားပွဲထိုးက မျက်စတချက်ပစ်၍ ပြန်ပြောသည်။ "အသေအချာ ရှိတယ်"ဟုသူက တကြိမ် အတွက်ဆိုလျှင် ၄,၀၀၀ ကျပ် ကျမည်ဟု ဆိုသည်။
စားပွဲထိုးက စားသောက်ဆိုင်မှနေ၍ အနီးရှိ ဆိုင်တခု အတွင်းသို့ ခေါ်သွားသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် အမိုးမရှိဘဲ ကြယ်မြင် လမြင်ဖြစ်နေသည်။
သူက ခုံတန်းလျား ပေါ်တွင် ၀တ်ဆင်ထားသည့် ထမီကို စောင်သဖွယ်ပြုပြီး အိပ်နေသည့် မိန်းကလေး တယောက်ကို အသံ ပြုလိုက်သည်။ အသံကြားလျှင် ထရမည်ဟု ကျင့်သားရနေသည့် အိပ်စက်မှုမှ အဆိုပါ မိန်းကလေးမှာ နိုးလာပြီး ကျနော်တို့ကို ကြည့်သည်။ သူ့အသွင်က အိပ်မှုန်စုံမွှား ဖြစ်နေသော်လည်း ဧည့်သည်လာသည့် အတွက် ၀မ်းသာသွားပုံ ရသည်။၊ ချက်ချင်းထ၍ သူ့ဆံပင်များကို လက်ဖြင့် ဖြီးသင်လိုက်သည်။
နှုတ်ခမ်းတွင် အပေါစားနှုတ်ခမ်းနီကို ဆိုးထားသည်။ သူမ၏ နီရဲတောက်နေသော နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးရောင်က၊ ညစ်ပေ နေသည့် သူ့အသွင်၊ စိုထိုင်းနံစော်နေသော အခန်းနှင့် ခြားနားစွာ တောက်ပနေသည်။
"သူ တယောက်ပဲရှိလား"ဟု ကျနော့် မိတ်ဆွေက မေးသည်။
"အခုအချိန်ထိတော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ တခြားကောင်မလေးတွေက ဒီည မလာကြဘူး"ဟု စားပွဲထိုးက စိတ်မရှည်သလို ပြန်ပြောသည်။
"သူနဲ့ ဆက်ဆံရင် ဘယ်မှာဆက်ဆံရမှာလဲ"ဟု ကျနော်က မေးသည်။
"ဒီမှာပဲ"ဟု မိန်းကလေးက သူအိပ်နေသော သစ်သားခုံတန်းကို လက်ညှိုးညွှန်ပြ၍ ပြန်ပြောသည်။
"ရှင်ကတခြားသွားချင်ရင်တော့ ဟိုက တဲဆီသွားလို့ရတယ်"ဟု မိန်းကလေးက ပြန်ပြောသည်။
သူညွန်ပြသည့် တဲ့ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ကျနော်ဆွံ့အသွားသည်။ တဲဟုဆိုနိုင်ရုံ အဆောက်အဦး၊ နံရံများနှင့် အမိုးများက ပြိုပျက်နေသည်။ အတွင်းတွင် မည်သည့် အရာမျှသဲကွဲစွာ မမြင်ရ။ အဆိပ်ရှိသည့် သတ္တ၀ါတကောင်ရှိနေရင်တော့…. စိတ်ထဲမှာရေရွတ်လိုက်သည်။
"မင်းတို့မှာ ကွိုင် (ကွန်ဒုံ) ရှိသလား"ဟု ကျနော်က သူ့ကို မေးကြည့်သည်။
"မရှိဘူး၊ အဲဒါသုံးတာကတော့ ဖောက်သည်ဖြစ်တဲ့ရှင့်အပေါ်မှာ မှုတည်တယ်"ဟု သူက ပခုံးတွန့်၍ ပြန်ပြောသည်။
ကျနော်နှင့် မိတ်ဆွေက မိန်းကလေးကို ငေးကြည့်မိကြသည်။ မည်သို့ ဆက်ပြောရမှန်းပင် မသိတော့။
"ရှင်တို့က ဒီညအတွက် ကျမရဲ ပထမဦးဆုံး ဖောက်သည်တွေပဲ၊ အခုမှဈေးဦးပေါက်မှာ၊ ဒီကရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မနက်ဖြန်အရေးကို ဖြေရှင်းရမှာ"ဟု သူက မယုံကြည်နိုင်စရာ ပြောလာသည်။
ကျနော်တို့က တောင်းပန်ရင်း အပြစ်မကင်းသလို တံခါးပေါက်ဘက်သို့ ခပ်လျှိုလျှို ပြန်ထွက်လာကြသည်။ ကျနော်တို့ ထွက် လာသည့်အချိန်တွင် ကျနော်က တဲအိမ်ဘက်သို့ တချက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ အမျိုးသမီးငယ်က ပြန်လှဲချလိုက်ပြီး၊ လုံချည်ကို မေးအထိ ဆွဲ၍ ခြုံလိုက်သည်ကို လစ်ဟာနေသည့် အုတ်နံရံအပေါက်မှ မြင်လိုက်ရသေးသည်။ ထို့နောက် လူကိုကွေးလိုက်ကာ ပြန်အိပ်သွားတော့သည်။
ကိုထွေး (မန္တလေး) ရေးသားသည့် Desolation Road ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာခရီးစဉ်အတွင်း အရေးပါသူ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံသွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေ ရှိလာဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) ဟာ လာမယ့် သောကြာနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဘက်က ဘယ်လို မျှော်လင့်ထားတယ်၊ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေကရော ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အခု ဇူလိုင် ၃ ရက်နဲ့ ၄ ရက်မှာ သွားရောက်မယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူက ဒီကနေ့ပဲ အတည်ပြု ပြောလိုက်တာပါ။ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို မြန်မာ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အနေနဲ့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ပြောခွင့်ရသူ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michele Montas) က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ်အတွက်တော့ မဖြေရှင်းလို့ မဖြစ်တဲ့ အချက် ၃ ချက် ရှိတယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ယူဆထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အနာဂတ်အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ မဖြေရှင်းဘဲ ထားခဲ့လို့ မဖြစ်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက် ၃ ခု ရှိတယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ယူဆပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်လာဖို့၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတရပ် အနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ပြန်စဖို့နဲ့ အများလက်ခံ ယုံကြည်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးဖို့ ဆိုတာတွေပါ။”
မြန်မာနိုင်ငံက မကြာခင်က ပြန်ရောက်လာတဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ (Mr. Gambari) ဟာ ဒီမနက်ပိုင်းမှာ သူ့ခရီးစဉ်ရလဒ်ကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ ဒီမနက်ပိုင်းကြမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ တရားဝင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။ အရင်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံး သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အချိန်အခါကို ရွေးနေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခု ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကအပြန် မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြဿနာရပ်တွေကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ပြောရခွင့်ရသူ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ်က ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကိစ္စရပ်တွေကို မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်လေလေ ငြိမ်းချမ်းတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ ပြည့်ဝတဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးကြွယ်ဝတဲ့ တိုင်းပြည်အဖြစ် စောစောရောက်နိုင်လေလေ ဖြစ်မယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် အားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ သူ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။”
အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၀၈ မေလတုန်းက တကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ရေး သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ အတော်အတန် ထောက်ပံ့ခွင့် ရခဲ့တယ်ဆိုပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ခရီးစဉ်ကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတခေါက်မှာလည်း အဲဒီအဆက် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး ကိစ္စတွေအတွက်လည်း ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးက ပြောပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း အနေနဲ့ အခုလို နှစ်ရက်တာ ခရီးစဉ်ကာလ အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်လုံလောက်ပါ့မလား၊ တွေ့ဆုံသင့်သူ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါ။ USCB အမေရိကန် အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုအောင်ဒင်ကလည်း မစ္စတာဘန်ရဲ့ ခရီးစဉ် ရက်တိုတောင်းမှုအပေါ်မှာ အားမရဖြစ်ပါတယ်။
“အားလုံး စိတ်ပူနေကြတာက သူ့ကို သွားလည်း သွားစေချင်တယ်၊ သူသွားပြီးရင်လည်း တိကျသေချာတဲ့ ရလဒ်တခု ထွက်စေချင်တယ်။ အဲဒီမှာ အားလုံးမျှော်လင့်တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးပေါ့။ သူကိုယ်၌ကလည်း သူသွားတဲ့ခရီးစဉ်က အဲဒီလိုမျိုး အောင်မြင်မှု တစုံတရာရှိတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဂမ်ဘာရီကို အရင်လွှတ်ပြီး သွေးတိုးစမ်းတယ်။ ဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ တကယ်ကိုပဲ နအဖဘက်က သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကို အပြုသဘော တုံ့ပြန်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ပေးလို့များ သူသွားသလား၊ အဲဒီလိုတော့ တွေးထင်စရာ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တဖက်ကကြည့်တော့လည်း ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကြီးတွေကို ဆွေးနွေးဖို့သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ၂ ရက်ထဲနေမယ်ဆိုတော့လည်း သိပ်ပြီး သဘာဝမကျသလို ဖြစ်တယ်။”
ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲ တဦးအနေနဲ့ အခုလိုသွားရောက်တယ်၊ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောဆို နားချနိုင်တယ်ဆိုရင် တစုံတရာ ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ရော မယူဆနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။
“ကျနော်တို့ကတော့ သူသွားလို့ အောင်မြင်မှု ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ သူလုပ်ရမယ့် နောက်အလုပ်ကို ရဲရဲရင့်ရင့် ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ကျနော်တို့က တိုက်တွန်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်အလုပ်ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို နအဖက အပြုသဘော မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင် ပြန်လာပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံရေးကိစ္စကို အရေးယူပါဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်က တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ဖို့ပါပဲ။”
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်မယ့် ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရားခွင်ကို ပြန်စ စစ်ဆေးဖို့ ရုံးချိန်းထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ လုပ်သင့်တယ်လို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိထားသလို အချို့လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ရလဒ်ကောင်း မရဘဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်တာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်း ယူဆမှုတွေ ရှိပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးမှာ ၀က်တုပ်ကွေး ဖြစ်နေသူ ၇၀,၀၀၀ ကျော်ပြီ
post by Tuesday, June 30, 2009
ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၀၉ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
ဒီနှစ် မတ်လကုန်လောက်က ဗိုင်းရပ်ပိုးစတွေ့တဲ့အချိန်ကစလို့ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်သူပေါင်း ၇၀,၈၉၃ ယောက် ရှိပြီး သေတဲ့သူ ၃၁၁ ယောက် ရှိသွားပါပြီလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO) က ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ အရဆိုရင်ပဲ တုပ်ကွေးရောဂါအသစ်ဖြစ်တဲ့ A(H1N1) ဗိုင်းရပ် ပိုး ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၁,၀၇၉ ယောက်ရှိနေပြီး ဒီအထဲမှာ သေဆုံးသူပေါင်း ၄၈ ယောက် ရှိနေပါပြီ။
Map of the spread of Infuenza A(H1N1): number of laboratory confirmed
cases and deaths As of5may 2009, 06:30GMT
နောက်ထပ်ဖြစ်ပွားသူ ၆,၂၈၂ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ အယောက် ၄၀ ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် အမေရိကန် တ၀ှမ်းလုံး
မှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇,၇၁၇ ယောက်ရှိပြီး၊ သေသူက ၁၂၇ ယောက်ရှိလာပါပြီလို့ အမေရိကန်က ထုတ်ပြန် အစီရင်ခံပါတယ်။ ကနေဒါမှာ အသစ်ဖြစ်ပွားမှု ၁,၀၄၃ ထပ်ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ၇,၇၇၅ဦး ရှိလာပြီး သေဆုံးသူ ၂၁ ဦး ရှိပါပြီ။ သြစတြေးလျမှာ အသစ်ဖြစ်ပွားမှု ၇၅၈ ဦးမှာ ၄ဦးသေပါတယ်။ စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၄,၀၃၈ ယောက်ရှိပါပြီ။
အမေရိကန်မှာ အနည်းဆုံး လူ ၁ သန်းလောက်ဟာ ၀က်တုပ်ကွေး ဖြစ်နေကြပြီး တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာထက် အဆ ၅၀ ကျော်တယ်လို့ အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်သို့ လက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့သည်ဟု ယူဆရသူ ၃ ဦး ဂျပန်တွင် အဖမ်းခံရ
Tuesday, 30 June 2009 19:00 ကိုထွေး
တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတမျိုး မြန်မာပြည်သို့ တရားမဝင် တင်ပို့ရန် ကြိုးပမ်းသူဟု ယူဆရသော လုပ်ငန်းရှင် ၃ဦး ကို ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်္ဂါနေ့တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ လာသော သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းမှာ တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သံလိုက်သတ္တိ တိုင်းတာသော ကိရိယာ တမျိုး ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ငွေကြေးဖလှယ်ရေး နှင့် ကုန်သွယ်မှု ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု သံသယ ရှိသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြောင်း Yomiuri Shimbun သတင်းဌာန၏ သတင်း တပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ တိုကျိုအခြေစိုက် လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်ကြသော မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၁ ဦး နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသား ၂ ဦးတို့ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
၎င်းတို့မှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား Toko Boeki ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ လီကျုံးဟို၊ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တခု၏ ဥက္ကဋ္ဌ Miaki Katsuki နှင့် ထုတ်ကုန် အေဂျင်စီတခု၏ ဥက္ကဋ္ဌ Yasuhiko Muto တို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို မြောက်ကိုးရီးယားသို့ တင်ပို့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတခု၏ ကုန်ပစ္စည်း မှာယူသည့် စာရင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့သည် ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား ပစ္စည်းများကို မြန်မာပြည်သို့ တင်ပို့ခဲ့ဖွယ် ရှိကြောင်း၊ မြောက်ကိုးရီးယား အနေဖြင့် ဒုံးကျည် စနစ် နှင့် သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများကို မြန်မာသို့ ဖြန့်ဝေပေးနေသည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း ရဲအရာရှိများကို ကိုးကားပြီး သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိန်းသိမ်းခံထားရသူ ၃ ဦးသည် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက ဂျပန်ယန်း ၇ သန်း နီးပါးခန့် တန်သည့် သံလိုက်သတ္တိ တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများကို မြန်မာပြည်သို့ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း ရဲတို့က ပြောသည်။ ထိုသို့ တင်ပို့ရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ စီပွား ကုန်သွယ်နှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။
ဖျက်အားပြင်း လက်နက် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း မပြုနိုင်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ဝန်းကျင်တွင် ယင်းကုမ္ပဏီက အလားတူပစ္စည်းမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ အမှတ် (၂) စက်မှု ဝန်ကြီး ဌာန သို့ ပေးပို့ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရသည်။
နှစ်ကြိမ်စလုံးတွင် ပြည်ပတင်ပို့ခွင့် လျှောက်လွှာ ပါဝင်ခြင်း မရှိသည်ကို ဂျပန် အာဏာပိုင်တို့က သတိထားမိခဲ့သဖြင့် သင်္ဘောပေါ်သို့ မတင်မီ အစီအစဉ်များ ပျက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ၏ အမည်မှာ New East International Trading Ltd ဖြစ်သည်။ ထို ကုမ္ပဏီကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ ပါတီဖြစ်သော မြောက်ကိုးရီးယား အလုပ်သမားပါတီ၊ ဒုတိယ စီးပွားရေးရာကော်မတီက တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်သည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း Yomiuri Shimbun သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယား စစ်တပ်အတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ယင်းကော်မတီက တာဝန် ယူထားသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ နှင့် မြောက်ကိုရီးယားသည် ၁၉၈၃ အောက်တိုဘာလက ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ဗိမ္မာန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အပြီးတွင် သံတမန် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည်။ ထိုပေါက်ကွဲမှုမှာ မြောက်ကိုးရီးယား အစိုးရ၏ လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် စုံစမ်းတွေ့ရှိရသည်။
၂ဝဝ၇ ဧပြီတွင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ပြန်လည် ဆက်သွယ်ရန် သဘောတူကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးကြသည်။
မြောက်ကိုးရီးယားသည် မြန်မာပြည်ကို ဒုံးကျည်များ ရောင်းချနေသည်ဟု အမေရိကန် အစိုးရ အရာရှိတို့က ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်ကပင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ ပပျောက်ရေး စီမံချက်ကြောင့် ဒေသခံများအခက်တွေ့
Tuesday, 30 June 2009 18:36 လွင်ကို
ချင်းပြည်နယ်တွင် ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာစနစ် ပပျောက်စေရန် အစိုးရက စီမံချက် ဆောင်ရွက် နေခြင်းကြောင့် မိရိုးဖလာ တောင်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်သူများ စားဝတ်နေရေး အခက်တွေ့ နေရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသော တောင်ပေါ်ဒေသ တစ်ခုဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာ ပပျောက်စေရန် အစိုးရက ကော်ဖီ၊ လက်ဖက် ကဲ့သို့သော နှစ်ရှည်ပင်များကို စိုက်ပျိုးစေသောကြောင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု မရှိသည့် ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် နှစ် ၃၀ နီးပါး အသက်မွေးခဲ့သည့် တီးတိန်မြို့မှ ဦးထန်းလိန်းက ဆိုသည်။
“လက်ဖက်တို့၊ ကော်ဖီတို့က စိုက်ပြီးပြီးခြင်း ငွေမပေါ်ဘူး။ နောက် ၄၊ ၅ နှစ်လောက်မှ အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားရမှာ။ ကျွန်တော်တို့က အရင်ကတည်းက စပါးပဲစိုက်လာတာ။ အခုအပင်တွေ စိုက်ရတာ လုံးဝ အဆင်မပြေ ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဒေသခံများကို ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သစ်ခုတ်ခြင်းများ တားမြစ်ထား သော်လည်း အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တချို့မှာမူ သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်များ ရရှိထားသည်ဟု သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ စိုက်ပျိုးခွင့် ပိတ်ပင်သည့်အပြင်၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက ချင်းပြည်နယ် အတွင်း သာမန်အရွယ်အစားထက် ပိုမိုကြီးမားသော မြေကြွက်ကြီးများ ပေါများလာပြီး စိုက်ခင်းများကို လိုက်လံ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ အနေနှင့် ပျက်စီးသွားသော ယာခင်း၊ စိုက်ခင်းများကို ပြန်လည် စိုက်ပျိုးထူထောင်ရန် အခက်အခဲ များစွာကြုံနေရသည်ဟုလည်း ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ တောင်သူတဦးက ပြောသည်။
“တောင်ယာ စိုက်ပျိုးတာကိုလည်း တားမြစ်တယ်၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် တပိုင်တနိုင် သစ်ခုတ်တာကိုလည်း တားမြစ်ထားတဲ့အထဲ စပါးခင်းတွေ ကောက်ပဲသီးနှံ အပင်တွေကို ကြွက်တွေ ၀င်ကိုက်ဖျက်လို့ ဒုက္ခရောက် နေရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ တောင်ယာစိုက်ပျိုးသူများသည် စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းထက် ဒေသ၀မ်းစာ ဖူလုံရေး ကိုသာ ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးနေရသောကြောင့် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများကို ကျောင်းထားနိုင်ရန် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ပလက်ဝမြို့နယ်မှ အထက်တန်းပြ ဆရာတဦးက ပြောသည်။
“လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက အရမ်း ခက်ခဲတဲ့အတွက် တောင်ပေါ်က စိုက်ထားပျိုးထားတာတွေကို တခြား မြို့ကြီးတွေကို သွားရောင်းဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီနှစ်မှာ သားလေး ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး။ စိုက်ခင်းလည်း ပိုးထိတယ် ကြွက်လည်း ကိုက်ခံရတယ်” ဟု ကလေးဝမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တဦးကဆိုသည်။
သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် စသော သဘာဝတောတောင်ရှိသည့် ဒေသများအား သဘာဝဘေးမဲ့တောများအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း အဆိုပါ ဒေသများ၏ အခြေခံလို အပ်ချက်ဖြစ်သည့် စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဒေသဖွံဖြိုးမှု ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက် နေသည့် NGO တခုမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက သုံးသပ်သည်။
တလအတွင်း မြန်မာ ၄၀၀၀ ထိုင်းတွင် အဖမ်းခံရ
Tuesday, 30 June 2009 17:41 သန်းထိုက်ဦး
နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်များ ထပ်မံ ပြုလုပ်ပေးမည် ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အမြောက်အမြား ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် ဝင်ရောက်လျက်ရှိရာ ဇွန်လ တလ အတွင်း၌ လူ ၄၀၀၀ ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော Manager Online အင်တာနက် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အလုပ်သမားလက်မှတ်အသစ် ရရှိရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဖုတ်ဖရမြို့နယ်မှ တဆင့် ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးမှုကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးထားသည့် သူများကို မဲဆောက်မြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ၀က) တာဝန်ရှိသူများထံ တိုက်ရိုက် ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့သည် ဟု တာ့ခ်ခရိုင် ဖုတ်ဖရမြို့နယ် ရဲစခန်း တာဝန်ကျ ရဲတစ်ဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကို မဲဆောက် လ၀က အချုပ်ခန်းက တဆင့် မြန်မာ ဘက်ကမ်း ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ ပြန်ပို့ လိုက်ရင် နောက်တနေ့ ပြန်ရောက်လာတာပဲ။ ဒီမြို့နယ်မှာ တနေ့ကို လူ ၂၀ လောက် ဖမ်းမိနေတယ်” ဟု ၎င်း တာဝန်ကျ ရဲကဆိုသည်။
ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်မြို့မှ ဘန်ကောက်သို့ သွားမည့် လမ်းကြောင်း တလျှောက် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်များတွင် စစ်ဆေးမှုများကို ယခင်ထက် တင်းကျပ်ထားကြောင်းလည်း ကြားသိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် မေလအတွင်း ထိုင်းအစိုးရ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်၊ လော၊ ကမ္ဘောဒီးယား အစရှိသည့်နိုင်ငံတို့မှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်းပိုင်းအထိ အလုပ်သမား လက်မှတ်များ ထပ်မံ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ကြားသိရသည်။
၎င်း ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်အရ အလုပ်သမားလက်မှတ် အသစ်များကို ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း စတင် ပြုလုပ်ပေးနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပေးခြင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ အလုပ်သမားများ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ပြီး နေထိုင် အလုပ် လုပ်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ရန် ဖြစ်သည် ဟု ထိုင်းအာဏာပိုင်များ က ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အလုပ်သမားအရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသူများ အနေနှင့်မူ ထိုင်း အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန၏ အစီအစဉ်သစ်ကို ကြိုဆိုသော်လည်း အလုပ်သမားများအတွက် ပြဌာန်းထားသည့် အခွင့်အရေး များကိုလည်း ကြီးကြပ်ပေးစေလိုသည်ဟု ပြောကြသည်။
ထို့အပြင် အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီးပါက၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ပင်လယ် အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများ၌ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့တွင် မြန်မာပြည်သား စုစုပေါင်း ၂ သန်းမှ ၄ သန်း အထိ ရှိသည်ဟု သိရပြီး အလုပ်သမား အများစု မှာ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ဖြင့် တရားဝင် အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ပြည်သူ့အိုးအိမ် (၇) ထောင်ကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးကိန်းဆိုက်
နအဖစစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့အနီး(၈) မိုင်ပတ်လည် ကျယ်ပြန့်သော ပင်းပက်တောင်ကြောတခုလုံးအား သတ္တုရိုင်း တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်းကြောင့် ထိုဒေသရှိ ပြည်သူ (၇) ထောင်ကျော်၏ အသက်အိုးအိမ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ဟု ပအိုးဝ်လူငယ်အစည်းအရုံးက ပြောဆိုသည်။
“ဒီပင်းပက်တောင် သတ္တုတွင်း တူးဖော်တဲ့စီမံကိန်းကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေ ဧက (၁) သောင်းကျော် အသိမ်းခံလိုက်ရတယ်။ လူဦးရေ (၇) ထောင်ကျော် ရွှေ့ပြောင်းခံရတော့မယ်။ မြေယာ အသိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုလည်း လုံလောက်တဲ့ နစ်နာကြေးမျိုး ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အစပိုင်းက အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မြေယာတွေကို လျော်ကြေးအနေနဲ့ ကျပ် (၁) သိန်းကနေ (၂) သိန်းပေးပြီး ပြန်လည် နေရာချပေးထားတာလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းက မြေယာ အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘာလျော်ကြေးမှလည်း မခံစားရဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီဒေသက ပြည်သူတွေကို မြေယာသိမ်းတဲ့အကြောင်းတို့၊ စီမံကိန်းအကြောင်းတို့ကို အသိပေးတာလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု ပအိုးဝ်လူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်ချန်ကီက ပြောကြားသည်။
ပအိုးဝ်လူငယ်အစည်းအရုံးက အဆိုပါပင်းပက်တောင် သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ (၃) နှစ်ကြာ လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ယင်းစီမံကိန်းကြောင့် ထိုဒေသတဝိုက်ရှိ ပအိုးဝ်ပြည်သူတို့၏ အိုးအိမ် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု များအား ဖော်ပြထားသည့် “အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်ဆီးခြင်း” ဟူသော အစီရင်ခံစာအား ဇွန်လ (၂၉) ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းရပ်စဲသင့်ပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးရန် ပအိုးဝ်လူငယ်အစည်းအရုံးက တောင်းဆိုထားသည်။
NEJ / ၃၀ ဇွန် ၂၀၀၉
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် လာမည့်ဇူလိုင် (၃) ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအပါအ၀င် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံများကြား အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အများလက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်စေရေးတို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ်ရှဲလ်မွန်တက်စ်က ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စရပ်တွေကို အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်လေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးကြွယ်ဝမှုတွေ စောစောဖြစ်ထွန်း လာနိုင်လေလို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘယ်လို အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဖို့ သူမျှော်လင့် ထားပါတယ်” ဟုလည်း မစ္စမွန်တက်စ်က ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းတို့က စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို မြန်မာအဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင် များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းနိုင်ရန်လည်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက မျှော်လင့်ထားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် ယခုလ (၂၆) ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် ယခုကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ခရီးစဉ် အတည်ပြု ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ ခု မေလတွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယခု သွားရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း၌လည်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံဆွေးနွေးသွားရန်ရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် ဇူလိုင် (၄) ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဟု သိရသည်။
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း ပြာပုံဖြစ်ရမည်ဟု ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ ကြိမ်းဝါး
ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရသည့် တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ၉၉၉ တပ်ဖွဲ့က လက်စားချေသည့် အနေဖြင့် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ကြိမ်းဝါးနေသောကြောင့် စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြ သည်။
ယခုလ (၂၆) ရက်တွင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ဒီကေဘီအေ (၉၉၉) အခြေချဗျူဟာ တပ်ရင်း (၇) မှ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်စံပြုံး (ဗိုလ်ဆန်ပြုတ်) အပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦး အထိနာကျဆုံးခဲ့သဖြင့် လက်စားချေရန် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့က ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီကေဘီအေကလူတွေ အတော့်ကို စိတ်ဆိုးနေကြတယ်။ သူတို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာက မယ်လခွင်ထဲမှာ ဆိုတော့ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို ပြာချပစ်မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးနေတယ်။ လူဆိုတာကတော့ ဒီလိုပဲ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ အပြောအဆိုမှားတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကို သတိတော့ထားရမယ်” ဟု ဒီကေဘီအေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးက ပြောသည်။
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များမှာ ၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေကြပြီး အထုပ်အပိုးများ ထုပ်ကာ နေ့နေ့ ညည စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်း ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်သူ စောကညောက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီကိစ္စပေါ့လို့မရဘူး။ ဒီလူတွေက နားပေါက်တဖက်တည်းပါတယ်။ အရင်ကလည်း မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ဒီကေဘီအေတွေဝင်ပြီးတော့ မီးရှို့တာတွေ၊ လုယက်တာတွေ၊ လူတွေကို ဖမ်းခေါ်သွားပြီး သတ်လိုက်တာတွေ ဖြစ်ဖူးတော့ အားလုံးက ဒီကိစ္စကို စိုးရိမ်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့၏ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ (၆၀) ခန့်အကွာတွင် ကရင်ဒုက္ခသည် (၅) သောင်းခန့် နေထိုင်သည့် မယ်လဒုက္ခသည် စခန်း တည်ရှိပြီး စခန်း၏မြန်မာဘက် နယ်စပ်မျဉ်းမှာ သောင်ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
ယခုလ (၂၆) ရက်တွင် ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၇) ဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်အပြီး (၉၉၉) တပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့အခြေချဗျူဟာ တည်ရှိရာ မြ၀တီခရိုင် ရွှေကုက္ကိုရွာသို့ သောင်ရင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်း ဆန်တက်ရာတွင် မယ်လရွာအနီးရှိ မောင်ကလာဝဲဟု ခေါ်သည့်နေရာ တွင် အမည်မသိအဖွဲ့တဖွဲ့၏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကို ခံကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် အသက်မသေဘဲ ဒဏ်ရာဖြင့် မဲဆောက်ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိလာသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုသည် ကေအန်ယူအဖွဲ့၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း ကေအန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုဒေးဗစ်သကဘောက အခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသတွင် မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များမရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဟု ပြောကြားသည်။
ကရင်ဒုက္ခသည်များကော်မတီ (ကေအာစီ) ဥက္ကဋ္ဌ စောရောဘတ်ထွေးက “ဒီလူတွေက အကုန်လုပ်ရဲကိုင်ရဲတဲ့ သဘောရှိတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ စခန်းကို တကယ်ဝင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ကရင်တွေပဲ သေကျေပျက်စီးမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကရင်တွေ သေကျေပျက်စီးမယ့် အလုပ်တွေကို မလုပ်စေချင်ဘူး။ မယ်လ စခန်းထဲမှာ ဒီကေဘီအေအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြဖို့ ပြောချင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ (၆၀) အကွာရှိ မယ်လစခန်းသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ထမ်းဟင်၊ ဘန့်တုံယမ်း၊ နို့ဖိုး၊ အုန်းဖျန်၊ မယ်လ၊ မယ်လအူး၊ မယ်ရာမို စသည့် ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်း (၇) ခုအနက် အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ ခေါ် လူရွှင်တော်ဇာဂနာကို ခယ်မဖြစ်သူ မငြိမ်းက မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်ဟု မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကိုသူရ ကျန်းကျန်းမာမာပဲတဲ့။ အသားဖြူလာပြီး ကိုယ်ရေစစ်သွားတာကိုတော့ သူက နေမထိ လေမထိ တိုက်ထဲမှာနေရလို့ လို့ပြောတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ မိသားစုဓာတ်ပုံတွေကိုပါ ပေးခွင့်ရခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခင်က ကိုသူရအား ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရာတွင် မငြိမ်းသည် မိတ်ဆွေတဦးအိမ်တွင် တည်းခိုခဲ့သော်လည်း ယခုတခေါက်တွင် အာဏာပိုင်များ၏ နှောင့်ယှက်မှုကြောင့် တည်းခိုခန်းတွင် တည်းခိုနေရကြောင်း အဆိုပါ မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
အသေးစိတ်မည်သို့ နှောင့်ယှက်သည်ကိုမူ မငြိမ်း ရန်ကုန် ပြန်မရောက် သေးသဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ၎င်းက ငြင်းဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းကလည်း မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်တွင် ကိုသူရသေဆုံးပြီဟူသည့် ကောလာဟလ သတင်းတခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများကလည်း ၎င်းတို့အား မေးမြန်းကြသည့်အတွက် စိတ်ပူပန်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုထောင်ဝင်စာရပြီး လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရသောကြောင့် စိတ်အေးရပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုသူရ၏ မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ ခေါ် လူရွှင်တော်ဇာဂနာသည် ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီး လေဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပမီဒီယာတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရကာ ယခုအခါတွင် မြစ်ကြီနားအကျဉ်းထောင်၌ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နှာခေါင်းစည်းများ ဈေးတက်
အောင်ထက် / ၃၀ ဇွန် ၂၀၀၉
ရန်ကုန် မြို့လယ်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားတိုင်း mask (နှာခေါင်းစည်း) တပ်ဆင်ရန် ကျောင်းအုပ်ကြီးများက ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ဒဂုံ (၁)၊ အထက (၅) ဗိုလ်တထောင်၊ လသာ (၂) ကျောင်းများတွင် နှာခေါင်းစည်းများတပ်ဆင်ရန် ယမန်နေ့မှစ၍ ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ATO အန်ဂျီအိုအဖွဲ့မှ အဆိုပါကျောင်းများရှိ မူလတန်းကျောင်းများကို နှာခေါင်းစည်းများ အခမဲ့ဝေငှခဲ့ပြီး အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားများအား နှာခေါင်းစည်းတခုလျှင် (၁၀၀) ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ယခင်က တခု (၅၀) ကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူသူမရှိသော နှာခေါင်းစည်းများကို ယခုအခါ ပြင်ပဈေးကွက်၌ တခု (၅၀၀) ကျပ်ဖြင့် ၀ယ်မရဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် A(H1N1) ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေးရောဂါဖြင့် မိန်းကလေး (၂) ဦး၊ ယောက်ျားလေး (၁) ဦး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်း ဆေးရုံတက်သူ မျက်မြင်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေသူ စုစုပေါင်း (၄) ဦးရှိပြီဖြစ်သော်လည်း တာဝန်ရှိသူများထံမှ အတည်ပြုချက် မရရှိပေ။ ဆေးရုံကြီးတွင် လုံခြုံရေးများ တင်းကျပ်ထားသည်။
A (H1N1) တုပ်ကွေး ကျောင်းတွင်း ပညာပေးများ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 30 2009 21:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ အထက်တန်းကျောင်းများ၌ A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျောင်းတွင်း ပညာပေးအစီအစဉ်များ စတင် ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ လူတုပ်ကွေးကပ်ဟု ခေါ်ဆိုသည့် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပညာပေး အစီအစဉ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ကမာရွတ် အထက်တန်းကျောင်း - အထက ၁ ၊ အင်းစိန် အထက ၁၊ မြောက်ဥက္ကလာ အထက ၅၊ အလုံ အထက ၂ တို့၌ ကျောင်းတွင်း ပညာပေးအစီအစဉ်များဖြင့် ပြုလုပ်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“နေ့တိုင်းကျောင်း အလံအလေးပြု (assembly) တွေမှာ ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြတယ်။ ကျောင်းနံရံတွေမှာ တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေးစာစောင်တွေ ကပ်ပေးတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပုဝါ၊ စက္ကူ (tissue) တွေနဲ့ ပါးစပ်ပိတ် ချောင်းဆိုးဖို့တို့၊ ဘေးနားက လူတွေ ချောင်းဆိုးရင် နှာခေါင်း ပိတ်ထားဖို့ အဲဒါတွေ ပြောပြတယ်” ဟု အင်းစိန် အထက ကျောင်းတခုမှ ကျောင်းအုပ်တဦးက ပြောသည်။
အလားတူပင် ကမာရွတ် အထက ၁ ကျောင်း၌လည်း ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ယမန်နေ့မှ စတင်ခဲ့ကြောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက ယခုလို ပြောသည်။
“ရန်ကုန်မှာက ရောဂါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဖြစ်သေးတော့၊ လောလောဆယ် နှာခေါင်းစည်းတွေဝတ်ဖို့ မတိုက်တွန်းထားဘူး။ လက်ကိုင်ပုဝါ၊ Tissue တွေလောက်ကိုတော့ သုံးဖို့ ကလေးတွေကို မှာထားပါတယ်။ ကျောင်းအပြင် အိမ်မှာလည်း ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကလေးတွေကို ပြောပြနေရပါတယ်” ဟု ဆရာမကြီးက ဆိုသည်။
ဤသည်မှာ ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့က အမှတ် ၃ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးကြူက ရန်ကုန်တိုင်းရှိ အထက ကျောင်းများမှ ကျောင်းအုပ်များကို ခေါ်ယူကာ ကျောင်းများ၌ A (H1N1) တုပ်ကွေး ပညာပေးများ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို ကျောင်းတွင်း ပညာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ပညာရေး၌ ထိပ်တန်းပြေးနေသည့် ဒဂုံအထက်တန်းကျောင်း အမှတ် ၁ ၌မူ ကျောင်းသားများကို နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရန် သီးခြားညွှန်ကြားခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ကျောင်းသား ၃ ပုံ ၁ ပုံခန့်သည် နှာခေါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။
“နှာခေါင်းစည်းတပ်လာဖို့ ကျမတို့ ပြောထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကို မေးကြည့်တော့ သူတို့ မိဘတွေက တပ်ဖို့ပြောလို့ တပ်လာတာပါလို့ ပြောတယ်” ဟု ဒဂုံ အထက ၁ မှ ဆရာမတဦးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ လေကြောင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည့် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး၌ A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ပထမဦးဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ မီဒီယာများ၌ တရားဝင် ထုတ်ဖော်အသိပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ဒေသခံများအနေဖြင့် တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နှာခေါင်းစည်းများ အလုအယက် ဝယ်ယူနေပြီဖြစ်သဖြင့် ဆေးဝါးရောင်းချသည့် ဆိုင်များ၌ နှာခေါင်းစည်း ဈေးနှုန်းများ ယခင်ကထက် အဆမတန် မြင့်တက်သွားသည်။
ရိုးရိုးနှာခေါင်းစည်း တခုလျှင် ယခင်က ကျပ် ၅၀ မှ ယခုအခါ ၁၅၀ ၊ Cup Mask ခေါ် ခွက်ပုံသဏ္ဍာန် နှာခေါင်းစည်းသည် ကျပ် ၁၅၀ မှ ၃၀၀ အထိ ဈေးနှုန်း မြင့်သွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားအနီးရှိ AA Pharmacy ဆေးဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
“မနေ့ တရက်ထဲက အခု ၃၀၀၀ ရောင်းကုန်သွားတယ်။ ဒီမနက်တော့ ပစ္စည်းပြတ်သွားတယ်။ ရုံးသူရုံးသားတွေ ဝယ်တပ်ကြတာ များတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဝယ်လိုအားများသဖြင့် ဆေးဆိုင်များ၌ ပစ္စည်းပြတ်လပ်သည်အထိ ဖြစ်သွားသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ်တခု၏ ရုံးခန်းအတွင်း နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရန်အတွက် ရုံးသူရုံးသားများကို အခမဲ့ ဝယ်ပေးကာ၊ တပ်ဆင်ရန်လည်း ဆော်သြထားသည်။
“ကျနော်တို့ မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ကျန်းမာရေး ပညာပေးအတွက် ကန်ပိန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးက marketing အဖွဲ့ကို နှာခေါင်းစည်းတွေ ဝယ်ခိုင်းတယ်” ဟု အဆိုပါ ဂျာနယ်တိုက်မှ အယ်ဒီတာချုပ်က ပြောသည်။
A (H1N1) တုပ်ကွေး ကာကွယ်ရေး နှာခေါင်းစည်းများ ပြတ်လပ်
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 30 2009 20:33 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရန်ကုန်။ ။ A (H1N1) လူတုပ်ကွေး ရောဂါပိုးရှိသူကို လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက ကြေညာပြီးနောက် ကူးစက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ရန်ကုန်ဒေသခံများသည် နှာခေါင်းစည်းများ အလုအယက် ဝယ်ယူကြရာ အရောင်းဆိုင်များ၌ ယနေ့ ပြတ်လပ်သွားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ နာမည်ကြီး City mart အပါအဝင် ဆေးဝါး လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၌ နှာခေါင်းစည်းများ ပြတ်လပ်ကုန်ပြီး၊ ဈေးကွက်အတွင်း တခုလျှင် ကျပ် ၁၅၀ ရှိရာမှ ယခု ၂ ရက်အတွင်း ကျပ် ၂၀၀ အထိ ဈေးတက်ခဲ့သလို၊ လမ်းဆုံများနှင့် ကားဂိတ်များ၌ လက်ကိုင်ရောင်းချများက တခုလျှင် ကျပ် ၄၀၀ အထိပင် ရောင်းချခဲ့ကြသည်။
မင်္ဂလာဈေးအတွင်းရှိ ဆေးဝါးရောင်းချသော ဆိုင်များ၌လည်း လက်ကျန် နှာခေါင်းစည်းများ အဝယ်လိုက်ခဲ့ပြီး လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြတ်တောက်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း မင်္ဂလာဈေး ၄ ထပ်ရှိ ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ဈေးသွားဈေးလာများ၊ ရုံးသွားရုံးလာများနှင့် ဘက်စ်ကားများပေါ်မကျန် နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားသူ အများအပြား တွေ့မြင်နေရသည့်အတွက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ တိုးတက်လာမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးအသိပညာများ တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း အိုင်တီပညာရှင်တဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ပြတ်လပ်ကုန်သည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကာကွယ်ရေး mask (နှာခေါင်းစည်း) များအား စက်မှု ၁ ဝင်းသူဇာ အရောင်းဆိုင်များမှ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသော်လည်း မည်သည့် ဈေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချမည်ကို မသိရသေးဘဲ လက်ရှိတွင်လည်း ရောင်းချမှု မရှိသေးပါ။
H1N1 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာမှုမှ ကာကွယ်ရန် လေဆိပ် အပါအဝင် နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များ၌ သေချာစွာ စစ်ဆေးနေကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းမီဒီယာများကလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာနေသည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်ဆေးမှုများသည် အားနည်းနေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချဖွယ် မကောင်းကြောင်း ပြောဆိုသည်ကို မြန်မာဘလော့ဂ်အချို့၌ ရေးသားပြောဆိုနေကြသည်။
ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ်မှု ရန်ကုန်တွင် နေ့စဉ်တန် ၂၀၀ ခန့်ရှိ
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 30 2009 19:43 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မန္တလေးမြို့တော်တွင် ပလပ်စတစ်အိပ်များ ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချ၊ သုံးစွဲမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်နေချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်မှု ပလပ်စတစ်သုံးစွဲမှု ပမာဏ မြင့်တက်လျက် ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နေ့စဉ်ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်မှုပမာဏဟာ တနေ့လျင် တန် ၂၀၀ နီးပါးရှိပြီး အခြားသတ္ထုနှင့် လျှပ်စစ်ပစည်းစွန့်ပစ်မှုမှာ တန် ၁၅၀ နီးပါး ရှိသည်ဟု အဆိုပါ ဌာနမှ စာရင်းဇယားများအရ သိရသည်။
“ရန်ကုန်မှာ အမှိုက်က တစ်နေ့ကို တန်ချိန် ၁၅ဝဝ ကျော်လောက် ထွက်ပါတယ်။ အဲဒိအထဲမှာ ကြေလွယ် ပျက်ဆီးလွယ်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးအမှိုက်က ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပါပါတယ်။ ပလပ်စတစ်က ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပြီးတော့ လျှပ်စစ်ပစည်းနဲ့ အခြားသတ္ထု ပစည်းက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပါပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ အရာရှိက ပြောပါသည်။
“မန္တလေးမှာတော့ ပလပ်စတစ် စစ်ဆင်ရေး ကောင်းကောင်း လုပ်နေပြီ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ထိခိုက်နစ်နာတယ်။ လူတွေလတ်တလော အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရပေမယ့် ရေရှည်အတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ ပလပ်စတစ်က တော်တော် အခြေအနေဆိုးနေပြီ။ နေရာတကာမှာ ပလပ်စတစ်ပဲ တွေ့နေရတယ် ရေမြောင်းတွေဆိုလည်း ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်။ မြောင်းဖော်တာတွေ ဘာတွေမလုပ်နိုင်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့ လမ်းတွေပေါ်ရေလျှံတာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော”ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောပါသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ပလပ်စတစ် အိတ် သုံးစွဲမှုကို လုပ်ငန်းရှင်များကို ခေါ်ယူသတိပေး တားမြစ်ခြင်း၊ သတင်း မီဒီယာများမှတဆင့်
ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့ လိုက်လံ သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှူး ဦးတင်ထွဋ်ကျော်က ပြောပါသည်။
“ကျနော်တို့ ၂၂ ရက်နေ့ကစပြီးလိုက်သိမ်းနေပါတယ်။ အခုအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ဖွဲ့ထားပါ တယ်။ မန္တလေးငါးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လမ်းဘေး ဈေးဆိုင်တွေ အားလုံး လိုက်သိမ်းနေတာ ဒီနေ့ဆို ပိသာာ ချိန် လေးရာလောက်သိမ်းဆည်းရ မိနေပြီဟု ဦးတင်ထွဋ်ကျော်က မန္တလေးမြို့ရှိ ပလပ်စတစ် စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောပါသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်မူ တနေ့လျင် အမှိုက်တန်ချိန် ၃၀၀ ခန့်ထွက်ရှိပြီး ယင်းအမှိုက် များတွင် ပလပ်စတစ်များ အများဆုံး ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
စံပြရွာသားများ နေအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ပြေး
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 30 2009 17:37 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး -နတလ အစီအစဉ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော စံပြကျေးရွာများရှိ ရွာသားများသည် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသဖြင့် နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်လည်ထွက်ပြေးမှုများ ရှိနေသည်။
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို.နယ်အတွင်း စံပြရွာများ တည်ဆောက်ထားသည့်အနက် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ခရေမြိုင်၊ ရွှေရင်အေး၊ တောင်ပြိုနှင့် လောင်ဒုံ ရွာများသို့ ယခုနှစ် ဧပြီလတွင် ရောက်ရှိလာသော မိသားစု ၁၅၀ အနက် ယခုအခါ ၃၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့က ရောက်လာပြီးလို့ အစိုးရက ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့အခါ ရောင်းစားပြီး ပြန်သွားကြတာ” ဟု မောင်တောမှ ကိုထွန်းဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နေအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လောင်ဒုံရွာသား တဦးကလည်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး၊ ဤသည်မှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးပြီး စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသဖြင့် ယခုလို ဖြစ်ရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
သူက “လယ်ပေးတယ်၊ ဆန်ပေးတယ်၊ နွားပေးတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နွေရာသီမှာ အဲဒီလယ်တွေ နွားတွေနဲ့ ဘာလုပ်စားလို့ ရမှာလဲ။ ကျန်တဲ့ အလုပ်ကလည်း လုပ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ နွားတွေကို ရောင်းစားပြီး ပြည်မဘက်ကို ပြန်ပြေးကုန်ကြတာ” ဟု ပြောသည်။
လာရောက်နေထိုင်သူများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အတွက် အာဏာပိုင်များက ပေ ၈၀-၆၀ မြေကွက်၊ အိမ်တလုံး၊ လယ်၊ နွား နှစ်ကောင်နှင့် ၆ လစာရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
ယခုလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ ဆိုက္ကားနှင့် လယ်ထွန်စက်ပါ ပေးနေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ မောင်တောမြို့ မြို့နယ်ကောင်စီ ရုံးဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
“စံပြရွာသားတွေကို ဆိုက္ကားတွေ ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အစီအစဉ်ကို ဒီလ အစောပိုင်းကတည်းက စနေပါပြီ။ အရင်က ထောက်ပံ့တဲ့ လယ်နဲ့ နွားတွေအပြင် အပိုထပ်ပြီး ထောက်ပံ့တာပါ” ဟု သူက ပြောသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြည်မပိုင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ၊ ထောင်ထွက်များ၊ စစ်ထွက်များအား စုစည်းကာ နတလ စံပြကျေးရွာများ တည်ဆောက်ပေးပြီး ပြန်လည် နေရာချထားလာခဲ့သည်။
နတလ စံပြရွာများကို ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ရွာတရွာလျှင် အိမ်ခြေ ၁၀၀ နှုန်းဖြင့် ရွာ ၁၀၀ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါ မိသားစု ၂၅၀၀ ခန့် ရောက်ရှိသည်။
ဤ နှစ်မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာ အများစု ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က အတင်းအကျပ် စစ်သင်တန်းတက်ခိုင်း
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 30 2009 17:34 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြား လူငယ်များကို စစ်တပ်အတွင်း စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် စစ်တပ်က ရွေးချယ်ပြီး ဆင့်ခေါ်နေသည်။
ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာကောင်စီ ရယကများက ပဲခူးမြို့ ဘောနပ်ကြီးရွာရှိ ခြေလျင်တပ်ရင်း - ခလရ ၉၇ သို့ လူငယ် အမည်စာရင်းများ ပေးပို့ခဲ့ရပြီးနောက် စစ်တပ်က တရွာလျှင် ဦးရေ ၂၀ နှုန်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကာ လာမည့်လတွင် ကျေးရွာအပိုင်အတွင်း တည်ရှိသည့် တပ်စခန်းများသို့ သွားရောက်၍ ပြည်သူ့စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ရယက များထံ ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့က အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၂၀ ကြား လယ်သမားမိသားစုက ကလေးတွေ ပါတာများတယ်။ ရယက တွေကလည်း စာရင်းတောင်းတယ်ဆိုတော့ ပေးလိုက်တာ။ ဘာမှန်းမသိဘူး။ အခုကျမှ ဒီလူငယ်တွေက ပြည်သူ့ စစ်သင်တန်း တက်ရမယ်။ အဲဒါ ရယက တွေက တာဝန်ယူ ပို့ပေးပါဆိုပြီး ရောက်လာတယ်'' ဟု ပဲခူးမြို့ ဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကာယကံရှင် လူငယ်များနှင့် မိဘများက စစ်သင်တန်း မတက်ရောက်လိုကြောင်း ငြင်းဆန်ကြရာ ရယက က ခြိမ်းခြောက်သည်များလည်း ရှိနေသည်။
''ဒီသင်တန်း မတက်ရင် ခင်ဗျားတို့ သားတွေ ပေါ်တာတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်လို့ ရယက က ပြောတယ်'' ဟု ဒေသခံ နောက်တဦးက ဆိုသည်။
ပဲခူးတိုင်း ကျေးရွာများ၌ ယခင်ကတည်းက ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် ပြည်သူ့စစ်များအဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး လက်နက်တပ်ဆင်မှု ရှိခဲ့သော်လည်း၊ လူငယ်များကို စစ်တပ်အတွင်း ခေါ်ယူ၍ စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရမည် ဆိုသဖြင့် စစ်သားသစ်အဖြစ် စုဆောင်းခံရမည်ကို ရွာသားများက စိုးရိမ်နေကြသည်။
''၁၉၉၇ တုန်းက ဒီလို တခါ ဖြစ်ဖူးတယ်။ လယ်စိုက်စရိတ် မကျေတဲ့ လယ်သမားတွေကို အစိုးရက တောင်ငူကို လယ်သမားတွေ ခေါ်သွားတယ်။ နောက်တော့ အားလုံးကို စစ်တပ်က ပေါ်တာဆွဲလိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုလည်း သင်တန်းဆိုပြီး ခေါ်ပြီး စစ်တပ်ထဲ ထည့်လိုက်မှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်'' ဟု ဒုတိယ ဒေသခံက ပြောသည်။
တရားမ၀င် လက်နက်တွေ သယ်ဆောင်လာတယ်လို့ သံသယရှိပြီး အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘော နောက်ယောင်ခံလိုက်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော အခု ပြန်လှည့်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ကမ်နမ်သင်္ဘောကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မြောက်ကိုရီးယားဆိပ်ကမ်းက ထွက်လာကတည်းက အမေရိကန် သင်္ဘောတွေက စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည်ခုတ်မောင်း သွားနေတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဒီသင်္ဘောဟာ ဗီယက်နမ် ရေပိုင်နက်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေပြီး မူရင်းနိုင်ငံကို ပြန်လှည့်သွားပုံ ရပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ နျူကလီးယားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းဝယ်မှုကို ကန့်သတ်တားမြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အရေးယူမှုအောက်မှာ ဒီသင်္ဘော ပထမဆုံး စောင့်ကြည့်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီသင်္ဘောသာ လှည့်ပြန်မယ်ဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အရေးယူမှုဟာ ထိရောက်မှုရှိတယ်၊ မြောက်ကိုရီးယားဟာ သူ့ခြေလှမ်းကို နောက်ပြန်လှည့်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်သူတဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး မြောက်ကိုရီးယား သံတော်ဆင့်သတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက စလို့ ဒုတိယအကြိမ် နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုတခုကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မြောက်ကိုရီးယားက လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂက ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည် ၅၀,၀၀၀ ပြည့်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံကို စွန့်ခွာပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံနေသူ ထောင်သောင်းပေါင်း များစွာထဲက တယောက်ပြီးတယောက်၊ တစုပြီးတစု တတိယနိုင်ငံတွေကို ကုလသမဂ္ဂ အစီအစဉ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့ကြတာ မနေ့ကဆိုရင် အယောက် ၅၀,၀၀၀ တိတိ ရှိသွားပါပြီ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည် အခြေချထားရေး အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က မနေ့က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ UNHCR ဌာနချုပ် ရုံးစိုက်ရာ ဂျီနီဗာမြို့က ဗွီအိုအေသတင်းထောက် လီဆာ ရှလိုင်း (Lisa Schlein) ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကို နော်ရှိုးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်း ၉ ခုမှာ ခိုလှုံနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် လောက်ကစလို့ တတိယနိုင်ငံကို အခြေချဖို့ အစီအစဉ် စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၅ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမို့ တတိယနိုင်ငံကို အခြေချတဲ့ ဒုက္ခသည် အရေအတွက် တိုးမြှင့်ခဲ့တာလို့ UNHCR က ပြောပါတယ်။
UNHCR ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ မစ္စတာ ၀ီလီယံ စပင်ဒ်လာ (Mr. William Spindler) က မနေ့က အယောက် ၅၀,၀၀၀ မြောက်သော ပလူရယ် ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တဦး တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာခဲ့တာမို့ ဒါဟာ မှတ်တိုင်သစ်တရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပလူရယ်နဲ့ သူ့မိသားစုဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားရောက်အခြေချကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာတဲ့ အယောက် ၅၀,၀၀၀ မြောက် ဒုက္ခသည်ကတော့ ကရင်နီလူမျိုး ကျောင်းဆရာတဦးပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မယ်ဟောင်ဆောင်မြို့အနီးက ဘန့်မိုင်နန်းဆွယ် (Ban Mai Nai Soi) ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းထဲက မူလတန်းကျောင်း တကျောင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးဘာသာကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက သင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဇနီး၊ ၂ နှစ်အရွယ် သမီးလေးတဦးနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မြို့ကနေ ဒီမနက်ပဲ ထွက်သွားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီ (New Jersey) ပြည်နယ်က ကမ်ဒန် (Camden) မှာ ဘ၀သစ်ကို စဖို့အတွက် ၂၈ နာရီလောက် လေယာဉ်ခရီးကို စတင်ခဲ့တာပါ။ သူတို့အတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်စီးဖူးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။”
ပလူရယ်ဟာ သူ့သမီးလေးရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးအပြင် သူနဲ့ သူ့ဇနီးအနေနဲ့လည်း ရှေ့ဆက် ပညာတွေ ဆည်းပူးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့လည်း မစ္စတာစပင်ဒ်လာက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတ၀န်းက ဒုက္ခသည်တွေဟာ တနေ့ကျရင် သူတို့ရဲ့ အမိနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာ တကယ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ မလွယ်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ UNHCR က ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်ခွာပြီး ဒုက္ခသည်ဖြစ်လာသူတွေ အတွက်ကလည်း သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် တခြားရွေးစရာလမ်းက သိပ်မရှိဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်အများစုဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာပဲ အနှစ် ၂၀ လောက်ကြာအောင် နေလာခဲ့ကြပြီး အမိမြေကို ပြန်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကလည်း ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ဖြစ်နေတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမြဲတမ်း အခြေချဖို့ အခွင့်အရေးကလည်း သူတို့ဆီမှာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် တတိယနိုင်ငံကို အခြေချတာကပဲ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာလမ်းတခု ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေကို အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ ဖင်လန်၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ ဆွီဒင်နဲ့ နော်ဝေး စတဲ့ ကမ္ဘာ့စက်မှုအင်အားကြီး ၁၁ နိုင်ငံက သူတို့နိုင်ငံမှာ အမြဲတမ်း အခြေချဖို့ လက်ခံခဲ့ကြတာပါ။
အဲဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာမှ အမေရိကန်ကို ရောက်သွားကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် အရေအတွက်က အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၃၆,၀၀၀ လောက် အခြေချပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခုလို မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ တတိယနိုင်ငံမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို အခြေချနေပေမယ့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်း ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၁၂,၀၀၀ လောက် ကျန်နေသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် ဒုက္ခသည် ၆,၀၀၀ ကနေ ၇,၀၀၀ လောက်ကို တတိယနိုင်ငံကို အခြေချဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်ပေးဖို့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆို
ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးဆက်တော့မယ့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွှတ်ပေးရေးအတွက် စစ်အစိုးရကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ အထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီရိုဖုမိ နာကာဆိုနဲ (Hirofumi Nakasone) နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သတင်းထောက်တွေကို အဲဒီလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နဲ့ ၄ ရက်နေ့မှာ သွားမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရသူ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michele Montas) က မနေ့က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ အဆိုအရ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မဖြစ်မနေ ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရေး၊ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ အမြန်ဆုံး စတင်ရေး၊ အများယုံကြည် ကိုးစားလောက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့အတွက် အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးရေးတို့ ပြုလုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေကို မြန်မြန်ကိုင်တွယ်လေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးကို ရှေးရှုပြီး အမြန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက အလေးအနက် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတိုက်အခံ အင်အားစု ကြိုဆို
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မကြာခင် သွားရောက်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အပေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးကလည်း ဒီခရီးစဉ်ကို အကောင်းမြင်ထားပါတယ်။ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အဓိကအကျဆုံး ကိစ္စဟာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) အာရုံစိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ မဟုတ်ဘဲ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား အမြင်တွေကို ဘန်ကောက်ရောက် ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သီတင်းပတ်ပေါင်း အတော်ကြာ ခန့်မှန်း ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ်ပဲ သွားရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့အရေး အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ (Mr. Ibrahim Gambari) ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကို တရက်ကြာ သွားရောက်ပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်း လာရောက်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးတဲ့နောက် သူ့ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို အစီရင်ခံအပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက သူကိုယ်တိုင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း လာမယ်ဆိုတာကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ကြိုဆိုလိုက်ပေမယ့် သူရည်ရွယ်ထားတဲ့ အဓိကကိစ္စရပ် ၃ ခုအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့ ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့အစည်းက ကြိုးစားဆောင်ရွက်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကိုရောက်လာရင်လည်း အဓိက NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့သင့်တယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ သဘောထားပါ။”
ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာ့အရေး ကြားဝင်ဆောင်ရွက် ပေးနေတာတွေမှာ တိုးတက်မှု မရှိလှတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ အားမလို အားမရ ဖြစ်တာတွေက ရှိနေပါတယ်။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူလည်းဖြစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးကျင့်ရှင်းထန်ကတော့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ အခုခရီးစဉ်အပေါ် အကောင်းမြင်ထားဆဲပါလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော် အကောင်းမြင်ထားသေးတယ်။ နည်းနည်းလေး Hopeful ဖြစ်သေးတယ်ဗျ။ အမှန်မှာ သူက ကျနော်လာဖို့ လိုချင်ရင် ဒေါ်စုကို အရင်လွှတ်ပါ၊ ကျနော် ဘာမှမရှိဘဲ လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ သူလုပ်နေတာ။ လုပ်နေပေမယ့် ဒီဘက်က ဘာမှ တုံ့ပြန်တာ မရှိတော့ ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ ဂမ်ဘာရီလာပြီး လာမေးတာလို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒါကို ဘာမှမဖော်ဘဲ တခါတည်း ၃ ရက်နေ့ အရောက်လာမယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောတာနဲ့ တခုခုတော့ ဖြစ်မလား၊ တခုခုတော့ လုပ်မလား၊ ဒီဘက်က SPDC အနေနဲ့ လိုက်လျောဖို့ တခုခုရှိမလားဆိုတာ နည်းနည်း မျှော်နေတာပါ။”
ဦးကျင့်ရှင်းထန်တို့ရဲ့ UNA အဖွဲ့က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုစာတစောင် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဆီ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ချက်ချင်းနဲ့ ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုနဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး ဦးဆောင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာရေးအတွက် စစ်အစိုးရကို ပိုပြီးသင့်လျော်တဲ့ ဖိအားတွေ ပေးပါလို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်လေ၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတခုအဖြစ် အမြန်ဆုံး ရောက်နိုင်လေ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ် ၃ ခုထဲမှာလည်း အပါအ၀င်ပါ။ အဓိက ကွာခြားချက် တခုကတော့ ကုလသမဂ္ဂက ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကို ထည့်သွင်းပြောဆိုပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ထည့်မပြောတာပါပဲ။
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အဓိကကိစ္စရပ် ၃ ခုထဲက တခုတလေတောင် အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ NLD အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က တွက်မထားပါဘူး။
“ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျနော် ဘာမှ သိပ်ပြောစရာ မရှိဘူး။ ခန့်မှန်းစရာလည်း အကြောင်းတော့ သိပ်မရှိဘူး။ ကျနော်ပြောတာက စစ်အစိုးရရဲ့ သဘောထားအနေနဲ့ ကျနော် ပြောချင်တာ။ စစ်အစိုးရကတော့ ခုနပြောတဲ့ အချက်ထဲမှာ တချက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့၊ ဒေါ်စုကို လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်း သူတို့ဘက်ကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီသဘောထားက သူတို့ မရှိဘူး။ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဒေါ်စုကို ထောင်ချမှာပဲ၊ အနည်းဆုံး လုပ်ထားနိုင်တာ သက်သက်သာသာ ဖြစ်အောင်ဆိုရင် ဆိုင်းငံ့ဘာညာ လုပ်ထားမယ်၊ သို့မဟုတ်လည်း အိမ်အကျယ်ချုပ်အနေနဲ့ ထားမယ်၊ စသည် ဒါလုပ်မှာပဲ။ ကျနော်ထင်တယ် ဒေါ်စုအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရက အမြဲတမ်း ခေါင်းမာတတ်တယ်လေ။ ဒေါ်စုနဲ့ ပတ်သက်လို့မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းမာတယ်၊ သူတို့ တိမ်းရှောင်မယ်၊ ဒါ လုပ်မှာပဲ။”
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရေးဟာ ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာ မူတည်မနေဘဲ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးက တကယ့်ကို အဓိကကျတယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က လက်ခံထားပါတယ်။
“အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပေါ်မှာ ဗမာပြည်ရဲ့ လတ်တလော နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တကယ့် Key က အဲဒီမှာတည်နေတယ်လို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒါထက်ပိုပြီး အဆင့်မြင့်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်စုလို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးလွှတ်ပေး၊ ပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလိုဟာမျိုး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို ကိစ္စမျိုး၊ စားပွဲဝိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသာ လုပ်နိုင်ရင်တော့ ဒါ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အဲဒီထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးက အဓိကအကျဆုံး အချက်ပဲ။ အဓိကအကျဆုံး အချက်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်းက အခြေခံဥပဒေ မပြင်ရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်း ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘူး။ နိုင်ငံရေးကို မရှိတော့ဘူး၊ ဒါပဲဗျ။”
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းလဲရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ခုချိန်ထိ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ အပေါ်မှာတော့ အကောင်းမြင်ဆဲပါလို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
“ဘာပဲပြောပြော အကုန်လုံး ရှိသမျှဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထဲမှာပဲ၊ စစ်အစိုးရ ပြောသမျှပဲ ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာကလည်း ပြောနေသေးတယ်၊ ကမ္ဘာကလည်း လုပ်နေသေးတယ်၊ နှီးနှောရာတော့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့အထိ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ဆောင်တာတွေမှာ အားမရတာတွေရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီအပေါ် ကျနော်တို့ တော်တော့်ကို အမြင်မကြည်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ တော်တော့်ကို စိတ်ပျက်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတယ်။ သို့သော် ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပစေ International Community ရဲ့ ကျနော်တို့အပေါ် ၀ိုင်းဝန်းမှု၊ ပံ့ပိုးမှု၊ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ အားတက်တုန်းပဲ၊ ဒါတွေအတွက် ကျနော်တို့ ကျေနပ်မှု ရှိတုန်းပဲ၊ အကောင်းမျှော်တုန်းပဲလို့ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။”
လက်ရှိမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီရိုဖုမိ နာကာဆိုနဲ (Hirofumi Nakasone) နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ တခြား ကမ္ဘာ့ရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးမယ်လို့ ဂျပန်ကလာတဲ့ သတင်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ပျက်ကျ၊ ကလေးငယ်တဦး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
ယီမင်လေကြောင်းလိုင်းက ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၅၃ ဦး လိုက်ပါလာတဲ့ Air Bus လေယာဉ်တစီးဟာ ကောမောရို့စ် (Comoros) နိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာ ပျက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွင်း ခရီးသည်တွေထဲက အသက်မသေဘဲ ကျန်ရစ်သူ ကလေးငယ်တယောက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးနေတဲ့ ရုပ်အလောင်း ၃ လောင်းကို ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ်ဟာ ယီမင်နိုင်ငံမြို့တော် ဆာနာ (Sanaa) ကနေ Grand Comore ပင်မကျွန်းက မော်ရိုနီ (Moroni) မြို့ကို ဦးတည်ပျံသန်းစဉ် ဒီနေ့မနက် အစောပိုင်းက ပျက်ကျခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယီမင်လေကြောင်းလိုင်း တာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ပျက်ကျရသလဲဆိုတဲ့ သတင်းအသေးစိတ် အချက်အလက်ကိုတော့ ချက်ချင်း မသိရသေးပေမယ့် လေယာဉ် ကျွန်းနားကိုရောက်ခါနီး လေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ Air Bus 310 အမျိုးအစား လေယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ ခရီးသည် ၁၄၂ ယောက်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၁ ယောက် လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။
ကောမောရို့စ်နိုင်ငံဟာ မာဒါကာစကာကျွန်းရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂၀၀ အကွာက မိုဇမ်ဘစ် ရေလက်ကြားက ကျွန်း ၃ ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ် ပျက်ကျရာမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ခရီးသည် ၆၆ ယောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပံ့ပိုးဖို့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံက စစ်လေယာဉ် ၂ စီးကို စေလွှတ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘဲနာ့ဒ် ကုရှနဲ (Bernard Kouchner) က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒုံးလက်နက်နည်းပညာ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ဖို့ ကြံစည်သူ ၃ ဦး ဂျပန်ရဲက ဖမ်း
ဒုံးလက်နက် ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သံလိုက်တိုင်းတာရေး ကိရိယာတခု မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ဖို့ ကြံစည်နေတယ်လို့ မသင်္ကာရသူ ၃ ဦးကို ဂျပန် နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်ရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး စည်းမျဉ်းတွေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသား အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် ရီကျွန်ဟို (Ri Kyong Ho)၊ ဂျပန်နိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ယာဆုဟီကို မူတို (Yasuhiko Muto) နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် မိယကိ ကတ်ဆုကိ (Miaki Katsuki) တို့ ၃ ယောက်ဟာ သံလိုက်တိုင်းတာရေး ကိရိယာတခု မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ဖို့ ကြံစည်နေကြကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီကနေ အဲဒီကိရိယာကို မလေးရှားကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာလို့ ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့အရေး စောင့်ကြည့်သူတွေကတော့ ဒုံးလက်နက် ထုတ်လုပ်ရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတချို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကတဆင့် မြောက်ကိုရီးယားကို တင်ပို့တာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တားမြစ်ပစ္စည်းတွေ လျှို့ဝှက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ မစ်ဆိုင်း (Missile) ဒုံးလက်နက် နည်းပညာ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ အလေ့အထကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ ဒီဖမ်းဆီးမှုက တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကုလသမဂ္ဂက တားမြစ်ထားတဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားပိုင် ကမ်နမ် ၁ (Kang Nam 1) ကုန်တင်သင်္ဘောဟာ စင်ကာပူကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအရ အမေရိကန် ရေတပ်ဖျက်သင်္ဘော Destroyer MSS John McCain ကလည်း မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားပိုင် ကမ်နမ် ၁ ကုန်တင်သင်္ဘော မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖို့ မရှိဘူးလို့ စစ်အစိုးရ သတင်းစာမှာ အရင်သီတင်းပတ်အတွင်းက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်တပ်တွေ အီရတ်မြို့ပြတွေပေါ် ရုပ်သိမ်း
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ရုပ်သိမ်းမှုကြောင့် ပျော်ရွှင်နေကြသည့် အီရတ်ပြည်သူအချို့။
ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၀၉။
အီရတ်နိုင်ငံက မြို့ပြဒေသတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကို တနင်္လာနေ့တုန်းက ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ အင်္ဂါနေ့ မနက်ကစပြီး ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်နဲ့ အီရတ်နိုင်ငံ တ၀န်းက တခြားမြို့တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို အီရတ်တပ်တွေက တရားဝင် လွှဲပြောင်းယူမှုတွေ စတင်နေပါပြီ။
အီရတ်နဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ ပူးတွဲစစ်ဌာနချုပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အရင် ကာကွယ်ရေးဌာန အဆောက်အဦး အဟောင်းရဲ့ သော့တွေကို ဘဂ္ဂဒက်က အမေရိကန် တပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒန်နီယယ် ဘိုလာဂါက အီရတ်တပ်မှူးကြီးဆီကို တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားတခုမှာ လက်လွှဲ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ အီရတ်နိုင်ငံ အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေ့အဖြစ် အီရတ်အစိုးရက ကြေညာထားတာနဲ့အတူ အီရတ်ပြည်သူတွေဟာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်ထဲက ပန်းခြံတွေ၊ မော်တော်ကားတွေမှာ အီရတ်အလံတွေ၊ ဖဲကြိုးတွေစည်းပြီး ကြိုဆိုနေကြသလို ဒီယာလာနဲ့ ဒီဝါနီယာ ခရိုင်တွေမှာ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွေ၊ အတီးအမှုတ် ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
စိုက်ပျိုးစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် ငွေကြေးဖြတ်တောက်နေမှုများ ပြုလုပ်နေ
Monday, 29 June 2009 00:00 ရိုးမ ၃
ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်း စပါးစိုက်တောင်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးနေလျှက်ရှိပြီး အချို့နေရာများတွင် မျိုးစပါးများပါ ထုတ်ပေးခြင်များပြုလုပ်ကာ ငွေကြေးဖြတ်တောက်မှုများရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၇၆ ရွာမှ လယ်သမားများကို စိုက်ပျိုးစရိတ်အဖြစ် ဂျာမန်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(GAA) က ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားကျေးရွာများတွင် ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ငွေထုတ်ပေးကာ မျိုးစပါးမယူပါက ငွေကြေးဖြတ်တောက်ယူနေလျှက်ရှိသည်။
"စိုက်ပျိုးစရိတ် တသိန်းထုတ်ပေးတာက (၁) ရက်နေ့က ထုတ်ပေးတာ၊ စာရွက်မှာ တသိန်းလို့ ရေးထားတာတော့ တွေ့တယ်၊ ပြီးတော့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းအောင်လေး၊ ဦးမောင်တာတို့ဆီမှာ သွားထုတ်ရတာ၊ အဲဒီမှာ သူတို့ဆန်စက်က မျိုးစပါးကို မကြိုက်ရင် ၈ သောင်းခွဲလောက်ပဲ ထုတ်ပေးတယ်၊ အဲဒါက ငွေကို အတိုးနှုန်းပုံစံနဲ့ ယူထားတာ" ဟု ကြိမ်ချောင်းကြီးဒိုင်နယ်မှ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
လယ်သမားများအနေဖြင့် ယမန်နှစ်ကတည်းက ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များ ထုတ်ပေးသည့် စပါးမျိုးများမှာ မကောင်းသဖြင့် အပြင်ကသာ ဝယ်ယူလိုကြပြီး ယခုလက်ရှိ မျိုးစပါးပေါက်ဈေးမှာ တဧကလျှင် ၅ သိန်းဝန်းကျင်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျာမန်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကို မေးမြန်းရာ မိမိတို့အနေဖြင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကြိမ်ချောင်းကြီးဒိုင်နယ် ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ လယ်သမားများကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးကာ ငွေထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ (GAA) က ထုတ်ပေးတာက စိုက်ပျိုးထွန်ယက်စရိတ်ပါ၊ ကြိမ်းချောင်းကြီးမပါဘူး၊ အောက်ဘက်က ကမကလူ၊ ပက်ပြဲ၊ ဗြူးစခန်း၊ သုံးထပ်၊ ပျဉ်ဘိုးကြီး၊ မရမ်း၊ ချောင်းကြီးဝရွာတွေပါ၊ မျိုးစပါးကို အစောပိုင်းတုန်းက သက်သက်ထုတ်ပေးထားတယ်၊ အခုက လယ်သမားတွေကို တိုက်ရိုက် လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပေးတာ" ဟု ပြောသည်။
(GAA)အနေဖြင့် ဘိုကလေးအောက်ပိုင်းဒိုင်နယ်များတွင် လယ်သမားတဦးလျှင် ငွေကျပ် ၉၆,၀၀၀ နှင့် ဘိုကလေးအထက်ဘက် ကျေးရွာများတွင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကို လယ်သမားများထံ အဖွဲ့များဆင်း၍ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
]"ကြိမ်ချောင်းကြီးဘက်မှာက မြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ သူတို့လုပ်တာ၊ မျိုးစပါးထုတ်ဖို့ လက်မှတ်လေးတွေ ပေးတာ၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီမှာ ထုတ်ကြတာ၊ ကျနော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး" ဟု ပြောသည်။
ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ လယ်သမားများကို ယခုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ရာတွင် လယ်သမားများအနေဖြင့် အပြည့်အဝ ရရှိခြင်းမရှိသည့်အခြေအနေများကို ကြိမ်ချောင်းကြီးဒိုင်နယ်မှ လယ်သမားတဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ကတော့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေဆီက မလိုချင်ဘူး၊ အဲတော့ စပါးမယူရင် ငွေက ခုနပြောသလောက်ပဲ ရတယ်၊ တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို့က ကျနော်တို့ကို ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး၊ အချိန်တန် စပါးထွက်ရင်လဲ သူတို့စက်မှာ သွားရောင်းရတာပဲ၊ ဒါကိုတောင် အခုလို သူများအလကားပေးတာကို အမြတ်ယူသေးတယ်၊ တသိန်းလှူရင် ရွာကိုရောက်ရင် သုံးသောင်းကျော်လောက်ပဲရှိတာ" ဟု ပြောသည်။
စစ်တွေတွင် ပြည်သူပိုင် လယ်မြေများအား စစ်တပ်မှ သိမ်း
ခိုင်သိန်း (နိရဉ္စရာ) ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်တွင် စစ်လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် နှင့် တပ်ရင်း တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ရန် အတွက် ပြည်သူပိုင် လယ်မြေများကို စစ်တပ်မှ များမကြာမီက သိမ်းယူလိုက်ကြောင်း ဒေသခံ လယ်သမား တဦးက ပြောသည်။
စစ်တွေအနီးရှိ ရေချမ်းပြင် ကျေးရွာနှင့် အမြင့်ကျွန်း ကျေးရွာရှိ ဒေသခံ လယ်သမားများ ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ် ၂၃ ဧက ကျော်ကို တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သောင်းအေး၏ ညွှန်ကြားချက် အရဟု ဆိုကာ လျော်ကြေး တစုံတရာ မပေးပဲ ယခုလ ၂၁ ရက် နှင့် ၂၂ ရက်တို့တွင် စစ်တပ်မှ သိမ်းယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပညာရေး (၁၀) စစ်လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း ဆောက်ဖို့ မြေလိုတယ် ဆိုပြီး စစ်တပ်က ကျွန်တော်တို့ ရွာက လယ်တွေကို ဒီလ (၂၂)ရက်နေ့မှာ လာသိမ်း ပါတယ်။ သိမ်းယူခံရတဲ့လယ်က ၄ ဒသမ ၂ ဧက ကျော်ရှိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဦးအမဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်တွေဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ လယ်သမားက ပြောသည်။
စစ်တွေ ရေချမ်းပြင်အခြေစိုက် တပ်ရင်း ခမရ (၂၇၀)မှလည်း တပ်ရင်း တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ရန် မြေလိုသည်ဟု ဆိုကာ ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရေချမ်းပြင်ကျေးရွာမှ လယ်သမားများ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည့် လယ်မြေများကို သိမ်းယူခဲ့သည်။
ခမရ ၂၇၀ မှ သိမ်းယူခဲ့သည့် လယ်မြေများမှာ ဦးဂေါက်ရပိုင်ဆိုင်သည့် လယ် ၈ ဧက၊ ဦးမောင်စော ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ် ၅ ဧက နှင့် ဒေါ်မယဉ်လှ ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ် ၆ ဧက တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။
“လယ်တွေဆိုတော့ မသိမ်းဖို့ အဲဒီ လယ်လာသိမ်းတဲ့ စစ်တပ် အရာရှိတွေ နဲ့ ကျေးရွာရယကလူကြီးတွေကို တောင်းပန် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အရာရှိတွေက တိုင်းမှူးရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ လာသိမ်းတာလို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။ အသိမ်းခံရတဲ့ သူတွေကိုတော့ လျော်ကြေး နစ်နာကြေး တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မပေး ခဲ့ပါဘူး” ဟု အဆိုပါ လယ်သမားကပြောသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးမည့် ရာသီတွင် ယခုကဲ့သို့ လျော်ကြေး တစုံတရာ မရရှိဘဲ လယ်မြေများ အသိမ်း ခံခဲ့ရ သောကြောင့် အဆိုပါလယ်သမားများမှာ သူတို့၏ သက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှုအတွက် အခက်အခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရ ကြောင်း သူက ဆက်ပြောခဲ့သည်။
နအဖစစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းသည့် အချိန်မှစ၍ စစ်တွေမြို့နယ်အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀ှန်းလုံးတွင် ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားများပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်မြေ ဧကပေါင်း များစွာကို အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့ပြီး အဆိုပါ လယ်များကို စစ်တပ်က ရခိုင်တောင်သူ လယ်သမားများကို စပါးဖြင့် ငှါးရမ်း လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် သေနတ်ဒင်များကို ဆေးရောင်ခြယ်ရန် နအဖမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် များကို ညွန်ကြား
Tue 30 Jun 2009, ကွန်းဟဒေ့
ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်မြို့တွင် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် နအဖအာဏာပိုင်များက ရန်သူနှင့်မိတ်ဆွေ ခွဲခြားနိုင်ရန် ၄င်းမြို့အတွင်းတွင် ရှိနေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ သေနတ်ဒင်များတွင် အမှတ်သားဆေးရောင်များ ခြယ်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့များ၏ သေနတ်ဒင်များတွင် အနီရောင်၊ ဒီကေဘီအေအဖွဲ့ဝင်များတွင် အဝါရောင်နှင့် ကေပီအက်ဖ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ သေနတ်များတွင် အပြာရောင် ခြယ်သရန် ဘုရားသုံးဆူမြို့ တပ်ရင်းမှူးက ညွန်ကြားခဲ့သည်ဟု ကေပီအက်ဖ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အခုက မြို့တွင်းမှာ လုံခြုံရေးမကောင်းတော့ သေနတ်ဒင်မှာ အရောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်အဖွဲ့ကလည်းဆိုတာ သိအောင်လို့ပါ၊ ဆေးရောင်အမှတ်အသားမရှိဘဲ သေနတ်ကိုင်တဲ့သူတွေ ရန်သူဆိုပြီးတော့ ခွဲခြားသိအောင်လို့ ဒီလိုလုပ်တယ်” ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ယမန်နေ့က ခလရတပ်ရင်း တပ်ရင်းမှူးမှ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ရှိနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အရာရှိများနှင့် ရပ်ကွက်ဥက္ကဌများကို အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အရာရှိများကို အထက်ပါကိစ္စများ ညွန်ကြားခဲ့ပြီး၊ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌများကိုလည်း ၄င်းတို့ရပ်ကွက်တွင် ဆိုင်ကယ်စာရင်းများကို ကောက်ယူထားရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် နီးစပ်သော မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပေါက်ကွဲသွားသော ဗုံးနှစ်လုံးမှာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ပစ်ချခဲ့သည်ဟု နအဖအာဏာပိုင်များက ယူဆခဲ့ သောကြောင့် သူစိမ်းဆိုင်ကယ်များကို သိရှိနိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းမြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
တရားဝင်မကြေငြာသော်လည်း ဗုံးဖောက်ခွဲသူများမှာ ကေအင်ယူအဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်ဟု နအဖအာဏာ ပိုင်များက ပြောနေကြသော်လည်း ၄င်းဒေသရှိ ကေအင်ယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို မေးမြန်းရာ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ရပ်မျိုးကို ၄င်းတို့အနေဖြင့် လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့အတွင်းနှင့် မြို့အပြင်တွင် လုံခြုံရေးများတင်းကျပ်ထားပြီး ၄င်းမြို့ရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ဒီကေဘီအေ၊ ကေပီအက်ဖ်နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အဖွဲ့များကိုလည်း ပူ့းတွဲလုံခြုံရေးယူရန် အကူညီတောင်းထားသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနား လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ရန် လူနေအိမ် အများအပြား ရွေ့ပြောင်းခိုင်းမည်
ဇွန်လ ၃ဝ ရက်၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား လေယာဉ်ကွင်း ပြေးလမ်းနှင့်ကွင်းအား တိုးချဲ့ရန်အတွက် မြေနေရာ တိုင်းတာမှုများ ကို ယခုလ(၂၈)ရက်နေ့ ညပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ယမန်နေ့က အေးမြသာယာ ရပ်ကွက်လူကြီးများအား ပယက အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်က တွေ့ဆုံပြီး လူနေအိမ်များ ရွေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ လေယာဉ်ကွင်းအနီးရှိ အေးမြသာယာရပ်ကွက်တွင် အိမ်ခြေနှစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီး အိမ်ခြေတစ် ထောင်ခန့် ရွေ့ပြောင်းခံဖွယ်ရှိသည်ဟု မြစ်ကြီးနားဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“အိမ်ခြေအတိအကျတော့ မသိဘူး၊ ရာကြီးပိုင်း၊ ထောင်လောက်တော့ ရှိမယ်။ အခုက တိုင်းတာနေ တုန်းပဲ။ ဂျာမိုင်ကောင်းရပ်ကွက်က အိမ်တွေလည်း ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြေးလမ်းကော၊ လေယာဉ် ကွင်းကောပါ ချဲ့နေတာ။ စီမံကိန်းကို မနှစ်က စတာ။ ဒါပေမယ့် အခုက စပြီး တိုင်းနေတာ။ ရွေ့ရ မှာက ပမ္မတီးဘက်ကို ရွေ့ရမယ်လို့ပြောတယ်။ မြစ်ကြီးနားကနေ (၁၈)မိုင်လောက်ဝေးတယ်တဲ့။ အဲဒီ ကလူတွေ အတော်လေး စိတ်ပျက် နေကြတာ။”
ရွှေ့ပြောင်းမည့် နေအိမ်များမှ တိုက်အိမ်တအိမ်လျှင် (၁၅)သိန်းနှင့် ပျဉ်အိမ် ကျပ်(၁ဝ)သိန်း ပေးလျော်မည်ဟု ပြောဆိုမှု များရှိနေသော်လည်း ယခုချိန်အထိ မည်သည့်အချိန်တွင် ရွေ့ရမည်ကိုမူ အာဏာပိုင်များဘက်က တိတိကျကျ ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
အေးမြသာယာရပ်ကွက်သည် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး သံလမ်းအနောက်ဖက် မြို့ပြင်တွင်ရှိ၍ ကွက်သစ်အဖြစ် ယခင်က ရှိနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူနေအိမ်အဆောက်အဦးများဖြင့် တဖြည်းဖြည်း စည်းကားရာ ရပ်ကွက်ကြီး တခုအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
“အခုက ရပ်ကွက်လူထုက ဘယ်လောက်အထိ ကန့်ကွက်လာမလဲဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း သွေးတိုးစမ်း လာနေတာ။ လူတွေ မသိတဲ့ ညပိုင်းကို မြေတိုင်းသွားတယ်၊ နောက်မှ ရပ်ကွက် လူကြီးတွေခေါ်ပြီး လူနေအိမ်တွေ ရွေ့ရမယ်ဆိုလို့ စပြောလာတာ။ ဘယ်အချိန် နောက်ဆုံးထားရွေ့ရမယ်ဆိုတော့ မပြော သေးဘူး။”
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တရုတ်ပြည်၊ ထိန်ချုန်းမြို့တွင် လေယာဉ်ကွင်းတည်ဆောက်ကာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ရေးအတွက် မြန်မာပြည်သို့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးရန် စီစဉ်မှု များရှိစဉ်မှ စ၍ မြစ်ကြီးနား လေယာဉ်ကွင်း အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းအဖြစ် ပြုလုပ်ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ယမန်နှစ်ကတည်းက စီစဉ်နေခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြေနေရာ တိုင်းတိုင်းတာမှုများ တရားဝင် ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားစီမံကိန်းကြောင့် ရွာသားများ အိုးအိမ်မဲ့စေမည်
ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ရုရှားနိုင်ငံ အထောက်အပံ့ဖြင့် တည်ဆောက်နေသည့် သတ္တု တွင်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းကြောင့် ယင်းဒေသရှိ ကျေးရွာလူဦးရေ ၇၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်များ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ရှိလိမ့်မည်ဟု ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံးက ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်ဆီး ခြင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော် ပြထားသည်။
အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်ဆီးခြင်း အစီရင်ခံစာကို ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း မှတ်တမ်းတင်ပြု စုခဲ့သည့် ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး၏ အတွင်းရေးမှူး ခွန်ဆျန်ကီက “လက်ရှိဆောက်တဲ့ စက်ရုံ သတ္တုသန့်စင်ဖို့ အဓိက ရေလိုအပ်နေတယ်။ ရေလိုအပ်တဲ့အတွက် ဟိုပုံးလွင်ပြင်မှာ အဓိကချောင်းမကြီးဖြစ်တဲ့ သဖက်ချောင်း ကို သူတို့ပိတ်လိုက်ပြီးသတ္တုသန့်စင်ဖို့ သူတို့ စက်ရုံထဲလွှဲ ထည့်လိုက်တယ်။ ချောင်းက မိုင်တစ်ရာ လောက် ရှည်တော့ စက်ရုံလည်ပြီ ဆိုတာနဲ့စက်ရုံက ထွက်လာတဲ့ ရေဆိုးရေညစ်ကြောင့် ရှမ်းပြည် နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ် စပ်မှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာပေါင်း တစ်ရာကျော်ကို ထိခိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး သံရိုင်းသိုက်ကြီးကို စစ်အစိုးရနှင့် ရုရှားနိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် (Tyashpromexpot)တို့ ပူးပေါင်းကာ တောင်ကြီးမြို့နယ် ပင်းပက်တောင်တွင် တူးဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
၂၀၀၆ခုနှစ် စက်ရုံတည်ဆောက်စဉ်ကပင် ဒေသခံလူထုများကို ဦးစားပေး အလုပ်ခန့် မည်ဟု အသိပေးခဲ့ သော် လည်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထမင်းချက် နှစ်ယောက်သာ အလုပ်ရရှိခဲ့သည်ဟု ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံးက ပြောသည်။
ပင်းပက်စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများလုပ်ငန်း ရပ်စဲသင့်ပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးရန် ခွန်ဆျန်ကီက တိုက်တွန်းသည်။
“ပင်းပက်သံရိုင်းသတ္တုတွင်းကြောင့် အိုးအိမ်မြေယာ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိသားစု အားလုံးအ တွက် လုံလောက်တဲ့ ထိခိုက်နစ်နာကြေးပေးဖို့ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုလည်း တောင်းဆိုချင်တယ်”
စက်ရုံသွားရာလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် ရွာ ၃ ရွာမှ လူထု ၅၅ ဦးကို ၄င်းတို့အိုးအိမ်များမှ အတင်းအကြပ်ပြောင်းရွှေ့ ဖယ်ရှားပစ်စေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒေသအာဏာပိုင်များက စိုက်ပျိုးမြေ ၁၁၀၀၀ ဧက ကိုလည်း သိမ်းပိုက်ရာ ကျေးရွာ လုထုများမှ ဒေသခံအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြတောင်းဆိုမှုများကိုလည်း လစ်လျူရှုထားခဲ့သည် ဟု အစီရင်ခံ စာကဆိုသည်။
ပင်းပက်သံရိုင်း သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု နှင့် သဘာဝပတ် ၀န်းကျင်ကို ဒေသခံလူထုနှင့် အတူ နိုင်ငံတကာမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်း အရုံးက တောင်းဆိုသည်။
ယခု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စစ်သားများက အရပ်ဝတ်များဖြင့် လုံခြုံရေး တင်းကြပ်စွာယူထားပြီး ဒေသခံ များအကြားတွင် ယူရေနီယမ် ထုတ်လုပ်သည်ဟူသော သံသယများလည်း ရှိနေသည်ဟု ပအိုဝ်းလူငယ်အ စည်းအရုံးက ပြောဆိုသည်။